အငှားလငျ လုပျပရစေ – My Blog
မိနျးမက အရမျးရှကျတတျသညျ။ အတို အကပျြတှေ ဘယျတော့မှ မဝတျ။ ဒါပမေယျ့ လိငျစိတျ ပွငျးသညျ။ နမျးရငျ ကိုယျ့လြှာကို နာတဲ့အထိ စုပျနေ ကိုကျနကြေ။ တဈရကျ အပွငျမထှကျခငျ သူ့အဖုတျကို ကလိပွီး အတှငျးခံဘောငျးဘီကို ပွနျပေးမဝတျဘဲ အပွငျသှားဖို့ ပွောသညျ။ တာမှပေလာဇာကို ကားနဲ့ မထှကျဘဲ လိုငျးကား အတူတူ တိုးစီးသညျ။ လငျမယားလို့ မထငျအောငျ သူနဲ့ မလှမျးမကမျးမှာ ရပျသညျ။ သူ့ကို တမငျထောကျလှမျးတဲ့သူ မပျေါလာပမေယျ့ တဈယောကျယောကျက ကားတိုးရငျး သူ့နောကျပိုငျးကို ပှတျမိတိုငျး မကျြနှာက နီနီတကျလာသညျ။ အတှငျးခံဘောငျးဘီတဈခုက ဘာမှမထူပမေယျ့ သူ့အတှကျ အကာအကှယျမဲ့နသေလို ဖွဈနသေညျ။ ဒါ ပထမဆုံး သူ့ကို လမျးစဖှငျ့ လကေ့ငျြ့ပေးတဲ့နေ့။ မိတ်ထီလာကို အလုပျကိစ်စ သှားရတဲ့အခါ အဆငျ့ခုနျတကျသှားသညျ။ ကြှနျတေျာ့သူငယျခငျြး လငျမယား ပါလာသညျ။ သူငယျခငျြးမိနျးမက နယျခံ။ ဟျောတယျ အခနျး နှဈခနျးယူပမေယျ့ ပထမည တဈခနျးတညျးမှာပဲ စုပွီး မအိပျခငျအထိ အလုပျလုပျရငျး စကားစုပွောကွသညျ။
ဒုတိယညမှာတော့ သူငယျခငျြးမိနျးမက ကိစ်စတဈခုပျေါလာပွီး သူ့အမအေိမျ သှားအိပျရသညျ။ သူငယျခငျြးကတော့ ကြှနျတျောတို့နှငျ့ ကနျြခဲ့သညျ။ သူ့နာမညျက သီဟပဲ ထားပါတော့။ ပထမညလိုပဲ ကြှနျတျောတို့က အလုပျလုပျ၊ မိနျးမက ဝငျအာလူးဖုတျသညျ။ ဒီအထိ ဘာစိတျကူးမှ မရှိသေး။ မိနျးမ ရခြေိုးပွီး ညဝတျဂါဝနျနဲ့ ကုနျးကုနျးကှကှ လုပျနတေုနျး သူငယျခငျြးက သူ့ဖငျကို သခြောကွညျ့ပွီး ကြှနျတေျာ့ဘကျကို လှညျ့ကာ လကျမထောငျပွသညျ။“ မငျးမိနျးမ အိုးက ကဈြနတောပဲ” လို့ တိုးတိုးပွောသညျ။ သူငယျခငျြးဆီက ဒီစကား ကွားလိုကျတာနဲ့ ကြှနျတေျာ့စိတျထဲမှာ ဖြိုးဖြိုးဖဉျြးဖဉျြး ဖွဈသှားသညျ။ ခေါငျးထဲ ဖတျြကနဲ ပျေါလာတဲ့အတိုငျး “တဈခါကွညျ့ ခမျြးဘီယာ နှဈဘူး တဈခါကိုငျ ဘလတျ တဈလုံး” လို့ ပွောလိုကျသညျ။ ဒီလိုပွောမှ တကျသာဆုတျသာ လုပျလို့ ရမညျ။ ကိုယျ့ကို တမြိုးမွငျမယျ့ကောငျမြိုးဆို စောကျခှကျပွောငျသလိုလို လြှောခလြို့ ရသညျ။ သူက “ ဂိုလျ ပါပေးမယျ ဖငျမယားနဲ့ တကယျကိုငျပဈမှာနျော” လို့ ပွောလာသညျ။ ကြှနျတျော ရငျတှေ ခုနျလာသညျ။
“လနေဲ့တော့ မလုပျနဲ့ ပုလငျးအရငျဝယျ” လို့ ပွောလိုကျတော့ ဒီကောငျ သှားဝယျသညျ။ ပါလာတာက ဘလတျ တဈလုံး။ “ငါ အားရအောငျ နယျမှာနျော” လို့ ခွိမျးခွောကျသေးသညျ။ ဒီကောငျနဲ့ ကြှနျတျော အလုပျလုပျရငျး နညျးနညျးစီသောကျကွသညျ။ မိနျးမက ဒီကောငျ့ကို “ကိုသီဟက မိနျးမလဈတာနဲ့ သောကျတော့တာပဲ… မတိုးတိုးနဲ့ ပွနျတိုငျမယျ”လို့ စနသေညျ။ “မငျး ဒီညတော့ အခနျးမပွနျနဲ့ ဒီမှာဘဲ အိပျလိုကျတော့”လို့ ပွောပွီး မိနျးမကို ကွညျ့လိုကျတော့ ခေါငျးညိမျ့ပွသညျ။ သူက ကြှနျတျောတို့ အကွံကို လုံးလုံး မရိပျမိ။ ဒီကောငျက မူပွီး “မငျးတို့ လငျမယား မလှတျလပျဘဲ နဦေးမယျ” ပွောတာတောငျ မိနျးမက ဒီကောငျ့ကို ဒီဘကျခနျးမှာပဲ အိပျဖို့ ပွောနသေညျ။ ကိုယျခံရမယျ့အကှကျ ကိုယျတိုငျခငျးပေးနသေလိုပဲ။ ဒီလိုနဲ့ မိနျးမက စောအိပျသှားသညျ။ ကြှနျတျောနှငျ့ သီဟ သောကျရငျး အလုပျဆကျလုပျသညျ။ သူက တျောတျော မကိုငျခငျြရှာ။ “ဟရေ့ောငျ ငါတကယျကိုငျမှာနျော” တဖှဖှ ပွောသညျ။
မငျးမိနျးမ ကှိုငျရှာရငျ မငျးရှငျးဆိုတာကလညျး ပါသေး။ အခနျးမီးပိတျပွီး မိနျးမဘေး ဝငျလှဲကာ စောငျခွုံလိုကျသညျ။ ဒီကောငျ ကြှနျတေျာ့ဘေးကို အသာကပျလာသညျ။ ကြှနျတျောက မိနျးမက ဖကျရငျး ဂါဝနျပျေါကနေ ပေါငျကို ပှတျပေးနသေညျ။ ပေါငျကို ပှတျရငျး ဂါဝနျပျေါကနေ စောကျဖုတျကို အုပျကိုငျလိုကျတော့ မိနျးမ မကျြလုံးပှငျ့လာသညျ။ ဟိုကောငျရှိတယျ သိသှားဦးမယျဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ မကျြစပဈသညျ။ ကြှနျတျောက ဂရုမစိုကျ။ ဂါဝနျတှနျ့ကွတေဲ့အထိ သူ့စောကျဖုတျကို ပှတျရငျး သူ့ကို ကွညျ့တော့ မကျြလုံးတှေ ရှဲနပွေီ။ သူ့နားနားကပျပွီး “ငွိမျငွိမျနနေျော မသိခငျြယောငျဆောငျနေ၊ ပွီးမှ ပွောပွမယျ”လို့ တိုးတိုးလေး ပွောလိုကျသညျ။ မိနျးမက ကွောငျအမျးအမျး။ ဘာကို ဆိုလိုသလဲ မသိ။ ကြှနျတျော ဒီကောငျ့လကျကို ယူပွီး မိနျးမ စောကျဖုတျပျေါ အသာတငျပေးလိုကျသညျ။
မိနျးမ ဆတျကနဲတုနျသှားပွီး မကျြလုံးပွူးကွညျ့သညျ။ ကြှနျတျောက အသာနေ မသိခငျြယောငျဆောငျနလေို့ ပွောတော့ မလုပျနဲ့လို့ ခေါငျးယမျးပွသညျ။ ဒါပမေယျ့ ဟိုကောငျ့လကျကို ဆှဲမဖယျ ကြှနျတေျာ့လကျကိုသာ ကဈြကဈြပါအောငျ ဆုပျထားသညျ။ ကြှနျတျော ရငျတှေ ခုနျခကျြက သလေောကျသညျ။ မိနျးမကလညျး အတူတူပဲ ခုနျနမှော သခြောသညျ။ ဟိုကောငျ ဘာလုပျနတေယျ မမွငျရ။ မိနျးမ မကျြလုံးက တျောတျောစငျးလာပွီး နှုတျခမျးလေးတှဟေကာ အသံတိုးတိုးထှကျလာတော့မှ ဒီကောငျ့လကျကို စမျးကွညျ့တော့ သကောငျ့သားက ဂါဝနျပျေါက မကိုငျဘဲ ဂါဝနျကို လိပျတငျပွီး မိနျးမစောကျဖုတျကို ပယျပယျနယျနယျကို ကလိနသေညျ။ ဒငျးလကျကို ဖယျပွီး ကြှနျတျော စမျးကွညျ့တော့ သူ့စောကျဖုတျမှာ အရညျတှေ စိုကာ ပှဖောငျးနလေပွေီ။ မိနျးမကို တဈဖကျလှညျ့ကာ ကြောပေးခိုငျးလိုကျသညျ။ ဒီတဈခါ ပေးကိုငျလိုကျတော့ ဒီကောငျက မိနျးမဖငျကို ညှဈညှဈပွီး ကိုငျသညျ။ လကျရဲဇကျရဲနဲ့ ဖငျကွားထဲအထိ လကျသှငျးကာ စောကျဖုတျကိုပါ နှိုကျတော့သညျ။ ပကျလကျတုနျးက စောကျဖုတျကို ကလိရုံလေး ကလိလို့ ရတာ။
အခု သသေခြောခြာ နှိုကျလညျးနှိုကျကော မိနျးမ ငွီးသံ ရှိုကျသံတှေ တိုးတိုးလေးကနေ ကယျြလာတော့သညျ။ စောကျဖုတျနှိုကျတာ တဈနာရီလောကျ ကွာလာတော့ မိနျးမလညျး ကော့ပွီး မြော့နတေော့သညျ။ ဒီကောငျက ငါမရတော့ဘူး ထညျ့ခငျြပွီကှာလို့ ပွောတော့ ကြှနျတျော လနျ့သှားသညျ။ ဒီအခြိနျ ဆုံးဖွတျရတော့မညျ။ ရှဆေ့ကျတိုးမှာလား ရပျသငျ့ပွီလား။ မိနျးမကတော့ လကျအသဈမို့ အရညျတှေ ထှကျတာ ဖငျတဈခုလုံးရှဲနပွေီ။ ဒီလောကျ မွနျမွနျ ခှငျ့ပွုရငျ မိနျးမသိက်ခာကသြှားမှာကို သှားတှေးမိသညျ။ တျောပွီလကှော ကိုယျပါကိုယျထုတော့လို့ တားလိုကျသညျ။ “ငါ သူ့အပျေါ ထုတျခငျြတယျကှာ အဲ့ဒါတော့ ခှငျ့ပွု ”လို့ လုပျလာပွနျသညျ။ သူ့ကွညျ့တော့လညျး အရှိနျက တကျနပွေီ။ ဗမာကားတှထေဲက မုဒိမျးကငျြ့ခါနီး လူကွမျးရုပျမြိုး။ မိနျးမကတော့ ခါးကို ကှေးလိုကျ ကော့လိုကျနဲ့ အိပျယာခငျးစကို ကိုငျကာ ဘေးစောငျးလဲနတေုနျး။ ခှငျ့ပွုသငျ့မပွုသငျ့ စဉျးစားနတေုနျး ဒငျးက ကြှနျတေျာ့ဘေးကနေ ထပွီး ကြှနျတေျာ့ကို ကြျောခှပွီး အလယျကို ဝငျသညျ။ မထညျ့နဲ့လို့ ကြှနျတျော ခပျတငျးတငျးပွောတော့ ခေါငျးငွိမျ့သညျ။
သူခဏ စောကျဖုတျကို ဆကျနှိုကျပွီး လီးကို မိနျးမ ဖငျကွားထဲ ဖွဲထညျ့ကာ အဖုတျဝကို ထိုးဆှကလိနပေုံရသညျ။ တကယျ လိုးနတေဲ့အတိုငျး ခါးကို ကော့ကော့ထိုးနတေော့ စောကျဖုတျထဲ တကယျသှငျးနတောလား ထငျပွီး ရငျတဖိုဖို ဖွဈရသညျ။ မိနျးမ အသကျရှုသံတှကေလညျး စောစောကထကျ သိသိသာသာ မွနျလာတာ အတိုငျးသားကွားရသညျ။ ဒီကောငျ ကှငျးထုရငျး ဆတျကနဲ ခပျကွမျးကွမျး ခါးကော့ထိုးလိုကျတာကို သတိထားမိလိုကျသညျ။ ကြှနျတျောခေါငျးထောငျကွညျ့တော့ ဒငျးက မိနျးမ ပခုံးကိုတောငျ အားယူကိုငျထားသညျ။ စောငျကို ကိုကျထားတဲ့ကွားက မိနျးမ အျောသံ တဈခကျြ ကယျြကယျြ ထှကျလာသညျ။ နှဈယောကျစလုံး ခဏ ငွိမျသှားပွီး သကောငျ့သားက ကြှနျတေျာ့ကို ဘေးကို ပွနျကြျောလာလိုကျသညျ။ လကျနဲ့ စမျးလိုကျတော့ မိနျးမ ဖငျကွားထဲမှာ သုကျရညျတှေ အမြားကွီး။ ဒီကောငျ့ကို မေးတော့ ဖငျကွားထဲပဲ ထညျ့တာ စောကျဖုတျထဲ လီးမသှငျးဘူး ပွောသညျ။ တကယျက စောကျဖုတျဝမှာလညျး အရညျတှေ အမြားကွီး။
စောစောက အငျ့ကနဲ မိနျးမ အျောလိုကျတာ ဒီကောငျထညျ့တာလို့ပဲ ထငျသညျ။ (နောကျပိုငျး) မိနျးမကို ပွနျမေးတော့လညျး မထညျ့ဘူး လကျနဲ့ပဲ ကိုငျတာလို့ ပွောပွနျသညျ။ မိနျးမပွောတာ လညျး မယုံရ။ ဟိုကောငျက သူဖငျကွားထဲအထိ ထညျ့တယျ ဝနျခံထားတဲ့ဟာ။ ဒါ ကြှနျတျောနဲ့ မိနျးမရဲ့ ပထမဆုံး အတှအေ့ကွုံပဲ ဆိုပါတော့။ အလုပျကိစ်စ မိတ်ထီလာကို ခရီးထှကျတုနျးက အတှအေ့ကွုံနောကျပိုငျး တံခါးတဈခပျြ ပှငျ့သှားသလို။ တံခါးအပွငျမှာ လမျးမကွီးကို ဖွူးနသေညျ။ မိနျးမဘကျကတော့ ဒီကိစ်စကို တဈခါမှ ထပျမပွောပမေယျ့ သူ့စိတျထဲမှာ စှဲနတေယျဆိုတာ သခြောသညျ။ သူ့ကို လိုးနရေငျး အရှိနျရလာတဲ့အခါ ‘ဟိုတခါက သီဟ ညီမကို တကယျ လိုးသှားတယျ မဟုတျလား မှနျမှနျဖွပေါ ကိုကို သိခငျြလို့’ ဟု မေးကွညျ့သညျ။ အဲ့လို မေးလိုကျတိုငျး သူ မကျြလုံးပှငျ့လာကာ တအငျးအငျးနဲ့ ပိုပွီး အသကျရှုမွနျလာသညျ။ ပါးစပျက မဖွဘေဲ ခေါငျးခါပွသညျ။ တဈညမှာတော့ ကောငျးကောငျးလိုးပေးနရေငျး တမြိုး အရဲစှနျ့ပွီး မေးကွညျ့သညျ။
“ကိုကို့ကို အမှနျအတိုငျး ပွောနျော… ညီမက သစ်စာဖောကျတာမှ မဟုတျတာ… ကိုကိုပွောလို့ ငွိမျခံနပေေးလိုကျရတာပဲ… ညီမကို သီဟနောကျကနေ လိုးသှားတယျ မဟုတျလား…” သူနှုတျခမျးကို ခဏကိုကျကာ ငွိမျနသေညျ။ ကြှနျတျော သူ့ကို ဘေးစောငျးထားကာ သီဟ နောကျမှ နတေုနျးက ပုံစံမြိုး ပွောငျးလိုကျသညျ။ လီးကို မသှငျးသေးဘဲ အဖုတျဝနှငျ့ တထေ့ားသညျ။ လကျနဲ့ နို့တှကေို အသာကိုငျရငျး လညျပငျးကို သိုငျးဖကျလိုကျသညျ။ လီးကို အဖုတျထဲ ဒဈဝမွုပျရုံသှငျးပွီး နားနားကို ကပျကာ သီဟထညျ့တာ ဒီလောကျဝငျလား လို့ မေးလိုကျသညျ။ ပွနျမဖွေ။ လီးကို ပွနျထုတျပွီး တဈဝကျကြျောကြျော မွုပျတဲ့အထိ တဆဈဆဈ ထပျသှငျးလိုကျသညျ။ သူ တဟငျ့ဟငျ့ ဖွဈလာသညျ။ “ညီမ ဖွပေါဦး… သူထညျ့တာ ဒီလောကျ ဝငျလား” “ကိုကိုက ညီမကို ဘာလို့ သူမြား ပေးလုပျတာလဲ… မခဈြလို့လား… ” သူ့လသေံက ခပျတိုးတိုး ခပျယဲ့ယဲ့။ “မဟုတျပါဘူး ညီမရယျ… ခဈြတာပေါ့… အမှနျအတိုငျးပွောနျော သူ ဘယျလောကျထိလုပျလဲ… အထဲကို ဝငျသလား… ” “ ထညျ့မှတော့… ဟငျ့… ဝငျတာပေါ့ ကိုကိုရယျ… ” ကြှနျတျော လီးရညျပငျ ထှကျလုလု ဖွဈသှားသညျ။ ရငျထဲတှငျ အေးခနဲ ရှိနျးကနဲ။
ကြှနျတေျာ့ သူငယျခငျြးက ကြှနျတေျာ့မိနျးမစောကျဖုတျထဲထိ လီးဝငျအောငျ ထညျ့သှားခဲ့တယျတဲ့။ သူ့ကို ခပျပွငျးပွငျးဆောငျ့ရငျး ပကျလကျပွနျလှနျလိုကျတော့ သူက မကျြနှာလှဲထားသညျ။ စောစောကစကားအတှကျ ရှကျနတော ဖွဈမညျ။ “သခြောပွောပါဦး ကလေးရယျ… သူပွောတော့ သူက ဖငျကွားထဲမှာ ညှပျထားရုံပဲတဲ့… တကယျ သှငျးလိုကျလို့လား… ” “သှငျးတယျ… … ဟိုးအထဲထိ…။ ကိုကိုက ပေးထညျ့လိုကျတာကိုး… သူမြားက ညီမကို အထဲထိဝငျအောငျ သှငျးသှားတာပေါ့လို့… ” သူ့ ညုတုတု အသံအဆုံးမှာ ကြှနျတျော သူ့ခါးကိုကိုငျကာ အပွငျးဆုံးဆောငျ့ရငျး လီးရညျမြား အကုနျအစငျ ထှကျတဲ့အထိ ညှဈသှငျးလိုကျသညျ။ သူက ကြှနျတေျာ့ကို ပွနျဖကျရငျး ခွထေောကျက ကြှနျတေျာ့ခါးကို ခှလိုကျသညျ။ သူစိတျကနြေပျမှ တုနျ့ပွနျတတျသညျ့ အမူအရာဖွဈသညျ။ သူ့ကို ပထမဦးဆုံးစလိုးရတုနျးကလို ရငျခုနျမှုမြိုး ခံစားနရေသညျ။ “ ညီမကို သီဟ လိုးသှားတာပေါ့… ” “ ဟုတျတယျ ကိုသီဟ ညီမကို တကယျ လိုးသှားတာ… ” “ ဒါဆို သူ့ လီးရညျတှေ… ညီမ စောကျဖုတျထဲ ထညျ့သှားလား…” သူက ကြှနျတေျာ့မကျြနှာကို ကွညျ့သညျ။
မကျြလုံးမှိတျကာ ခေါငျးငွိမျ့လိုကျပွီး ခကျြခငျြးပဲ ကြှနျတေျာ့ နှုတျခမျးကို အငမျးမရ စုပျနမျးတော့သညျ။ ဒီတဈခါ သူ့အနမျးတှေ အရငျကထကျ ရမကျပွငျးလှသညျ။ ကြှနျတျောလညျး သူ့ကို တငျးတငျးကပျြကပျြ ပှဖေ့ကျထားလိုကျသညျ။ ကြှနျတေျာ့ ခေါငျးထဲမှာတော့ အတှေးပေါငျးမြားစှာ။ သူမြားလငျနဲ့နမေညျ့ ကိစ်စ သူ့ကို စညျးရုံးရသညျမှာ လုံးဝ မလှယျ။ သီဟနှငျ့ ဖွဈခဲ့သညျ့ကိစ်စဖွဈပွီးနောကျပိုငျး သူ့ကို အထနျမိနျးမ အဖွဈနကွေညျ့ဖို့ ပွောပွလိုကျရငျ လှယျလှယျကူကူနှငျ့ ခေါငျးငွိမျ့မညျ ထငျခဲ့သညျမှာ တကျတကျစငျအောငျ မှားသှားသညျ။ သူ့စှပျစှဲခကျြအခြို့က ကြှနျတျောက သူ့ကို မခဈြလို့ တနျဖိုးမထားလို့ ဆိုတာမြိုး၊ ကြှနျတျောက နောကျတဈယောကျရှာခငျြလို့ သူ့ကို သစ်စာအရငျဖောကျခိုငျးနတေယျဆိုတာမြိုး၊ သူက ဖောကျပွနျတတျတဲ့ မိနျးမစားမြိုး မဟုတျဘူးဆိုတာမြိုး။ ဘယျမိနျးမကောငျးမှ ဒါမြိုး လကျခံနိုငျမှာ မဟုတျဘူးဆိုတာမြိုး။ အစုံပါပဲ။ ဒီစှပျစှဲခကျြတှကေ ပွငျးထနျသညျ။ ဒီအတှကျ ကြှနျတျောလိုတာ စိတျရှညျမှုနဲ့ အခြိနျသာ ဖွဈသညျ။
ကြှနျတျော သခြောအပိုငျ သိထားတဲ့အခကျြက သူက ကိုယျ့ယောကျြားကလှဲပွီး တစိမျးယောကျြားတှအေပျေါ လုံးဝ လိငျစိတျကငျးမဲ့နတေဲ့ စကျရုပျမမဟုတျ။ သှေးနဲ့သားနဲ့ ခံစားခကျြတှေ ရှိတဲ့ကိုယျပျေါမှာ ကိုယျကငျြ့တရားနဲ့ ထိနျးသိမျးထားတဲ့ မိနျးမမြိုး။ ကြှနျတေျာ့ဆန်ဒတဈခုတညျးအတှကျ သူလိုကျလြောရရငျ သူ့ဘဝတဈလြှောကျလုံး နာကငျြ ခံစားနရေတော့မညျ။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျော လိုခငျြတာက တစိမျးယောကျြားနှငျ့ အတူတူနရေနျ သူကိုယျတိုငျ ရငျခုနျလှုပျရှား စိတျပါခွငျး ဖွဈသညျ။ သူ့ကို နှဈဦးတညျး အတူတူရှိတိုငျး ပွောပွသညျ။ မြားသောအားဖွငျ့ အတူတူနပွေီးခြိနျ ရငျခှငျထဲမှာ ဖကျထားရငျး ပွောဖွဈသညျ။ ဖောကျပွနျတယျ မဖောကျပွနျဘူးဆိုတာ စိတျက အဓိကကကြွောငျး၊ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျ ကွညျဖွူသော ယောကျြားတဈယောကျက ပွုစုယုယတာကို လကျခံတာ သစ်စာဖောကျရာမကကြွောငျး တဖှဖှ ပွောပွသညျ။
အခြိနျပိုငျးလေး အတူတူနပွေီး နောကျပိုငျး လူမှုရေး ပတျသကျမှုမရှိရငျ ဘာအမညျးစကျမှ မဖွဈနိုငျတာကို သူယုံအောငျ ခဏခဏ ပွောရသညျ။ အကဉျြးခြုပျပွောရလြှငျ ကနျ့သတျခကျြ အခြို့နှငျ့ သူ ခေါငျးငွိမျ့ခဲ့သညျ။ တကယျတမျးက သူလကျခံအောငျ ကြှနျတျော ပွောဆို စညျးရုံးရတာ တဈနှဈခှဲလောကျ ကွာခဲ့သညျ။ တဈခါတလေ စညျးရုံးလို့ ရတော့မှာ မဟုတျဘူးလို့တောငျ စိတျပကျြခဲ့ရသညျ။ ကြှနျတျောက ရနျအဖွဈ မခံ။ မပွောဘဲလညျး မနေ။ သူမတတျသာလို့ လိုကျလြောရတဲ့အနအေထားမြိုး ဖွဈအောငျလညျး ကြှနျတျောက လမျးကွောငျးပေးထားသညျ။ ဒါမှ သူ့လိပျပွာ သူလုံမှာ ဖွဈသညျ။ သူ့ကို တဈဖကျက စညျးရုံးရငျး တဈဖကျက ပါတနာကို ရှာရသညျ။ တကယျဆိုရငျ ကြှနျတျော အရငျက လုပျလိုကျတာ လသာတုနျး ဗိုငျးငငျခဲ့ခွငျးသာ။ ကွိုတငျပွီး ဘာအစီအစဉျမှ မရှိ။ အခု တကယျ ကကြနြန လုပျမယျဆိုတော့ ကြှနျတေျာ့ခေါငျးထဲ အစစအရာရာအတှကျ တှေးပူရသညျ။ ပထမဆုံး စဉျးစားမိတာက အတှငျးရေး။
သမ်ဘာရငျ့ ဆရာသမားမြားက အတှငျးသိ အစငျးသိ ဝါသနာတူအတှဲကိုသာ ရှာဖို့ ရေးထားပမေယျ့ ကိုယျက ကိစ်စပွီးရငျ ကိုယျ့လမျးကိုယျလြှောကျ ကိုယျ့ဘဝထဲက ပြောကျသှားမယျ့သူကို ပိုလိုခငျြသညျ။ နယျမတူတဲ့သူ ရရငျ ပိုကောငျးမညျ။ နောကျတဈခုက ကိုယျ့ပွောစကား နားထောငျမယျ့သူ။ ဒါကတော့ ကိုယျ့ထကျ ငယျတဲ့သူကို ရှာရငျ ပိုကောငျးမညျဟု သှေးထဲက ပွောနသေညျ။ ကိုယျ့မိနျးမကို အနိုငျအထကျ လုပျလို့ ကိုယျက ကာကှယျပေးနိုငျမညျ့ အနအေထားမြိုး။ နောကျတဈခုက ရောဂါကငျးမကငျး။ ဒါကတော့ အန်တရာယျအကွီးဆုံးနဲ့ ညှိရအခကျဆုံး အနအေထား ဖွဈသညျ။ ဖဘေု့တျမှ ကိုလငျးလငျး၊ ကိုဂကျြ စတဲ့သူတှကေို အနညျးငယျ မေးမွနျးဖွဈသညျ။ ကနျြတဲ့သူတှေ အခငျြးခငျြးပွောကွတဲ့ အတှအေ့ကွုံကိုလညျး ရသလောကျ မှတျသားရသညျ။ နောကျဆုံး ကိုယျ့ဘကျက မလုံခွုံဘဲ ဘာမှ မလုပျရနျ ဆုံးဖွတျထားလိုကျသညျ။ ဂရုတဈခုမှာ ပို့ဈအစမျး စတငျလိုကျတော့ လူငယျ ခုနဈယောကျ ဆကျသှယျလာသညျ။ ကြှနျတျောက အသကျအစိတျအောကျ ကနျ့သတျခကျြနှငျ့ တငျထားတာ ဖွဈသညျ။
ဒါမှ ကိုယျ့ထကျငယျပွီး မိနျးမနှငျ့ ရှယျတူ ဖွဈသှားမညျ။ မကျြနှာပုံနှငျ့ ကိုယျလုံးပုံတှေ ပို့ခိုငျးသညျ။ နှဈခါ သုံးခါ ပို့ခိုငျးသညျ။ အဆငျမပွလြှေငျ နှမြောမနေ။ ကိုယျ့ဘကျက ဘာပုံမှ မပို့။ အပွငျမှာ ယောကျြားခငျြးတှမေ့ညျ။ တှတေဲ့အခါ မိနျးမပုံပွမညျ။ ကွိုကျရငျ ရှဆေ့ကျတိုး မကွိုကျရငျ ပွနျရုံ။ ပုံတော့ မပို့ပေးနိုငျ။ ဒါက မောကျမာတာ မဟုတျ၊ ကိုယျ့မိနျးမလုံခွုံရေးအတှကျ အပွညျ့အဝ ဦးစားပေးခွငျးသာ။ တခြို့က ဒီလိုတောငျ မေးသညျ။ ‘ခငျဗြား မိနျးမကို ကြုပျက တကယျလိုးမှာနျော တကယျပေးလိုးမှာလား…’ အဲ့ဒီအကောငျတော့ ဂြောငျးပတေော့။ ဘာမှ မလုပျဖူးတာ သခြောသညျ။ အပွောအဆို အဆငျ့ရှိတဲ့အထဲက ပငျကို ယဉျကြေးပုံရတဲ့သူ၊ ဟနျဆောငျစကား မပွောတတျသူသုံးဦး ကို စိတျနဲ့ ယာယီရှေးထားလိုကျသညျ။ အရိုငျးအစိုငျးကို မိနျးမ ပေးရလောကျအောငျ မရူးသှပျသေး။ တကယျတမျး ရှေးလိုကျတော့ မိနျးမကိုယျလုံးပုံကို ရှေးလိုကျတဲ့ ညီလေးဆီ ပို့ပေးလိုကျသညျ။
အပွငျမှာ အရငျ ရုပျရှငျအတူတူ ကွညျ့မညျ။ မိနျးမကို အလယျမှာ ထားပွီး ထု ခိုငျးမညျ။ မိနျးမ စိတျပါလာမှ ဟျောတယျ ဆကျသှားမညျ။ အလုပျမဖွဈလို့ ပွနျရရငျ စိတျမဆိုးကွေး။ လူရှေးလို့ ရလာတော့ သူ့ကို ကောငျလေးဓာတျပုံ ပွလိုကျသညျ။ အံ့သွစရာကောငျးလောကျအောငျ သူ့မကျြနှာ ခြှေးစေးတှပြေံလာသညျ။ တကယျလကျတှေ့ မိမိကို လိုးတော့မယျ တစိမျးယောကျြားရဲ့ ပုံ။ ကောငျလေးက ပစ်စညျးက ကိုယျ့ထကျတုတျနသေညျ။ မလုပျပါနဲ့လား ကိုကိုရယျ ညီမကို မသနားဘူးလားလို့ ပွောသေးသညျ။ ဒါပမေယျ့ တဈခါ ခေါငျးငွိမျ့ဖူးထားတော့ ကြှနျတျော တဈရကျနှဈရကျ ခြှဲလိုကျရုံနဲ့ လကျခံသှားသညျ။ ညီမ အဆငျမပွရေငျ ရုပျရှငျကွညျ့ပွီး ပွနျရုံပေါ့လို့ စိတျအေးအောငျ ပွောထားသညျ။ ခြိနျးထားသညျ့နေ့ မရောကျခငျ ရကျမြားတှငျ သူ တဈရကျမှ ဂနာမငွိမျ။ ကြှနျတျောလညျး အဲ့ဒီနမှေ့ စပွီး မလိုးတော့ဘဲ ဆှရုံဆှပေးပွီး အိပျယာဝငျသညျ။ သူ့ကို မရိုးမရှဖွဈနအေောငျ ပုံကို ပွပွပွီး အဖုတျကို ကလိပေးသညျ။ သို့နှငျ့ ခြိနျးထားသညျ့ ရကျကို ရောကျလာတော့သညျ။ ဒီနအေ့တှကျ ရှိသမြှအလုပျကိစ်စတှေ အကုနျ ရှငျးထားသညျ။ ဒီနကေ့ ကြှနျတျောနှငျ့ ခဈြဇနီးအတှကျ ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားစရာ အကောငျးဆုံး အမှတျတရ ဖွဈမှာ သခြောသညျ။
ရခြေိုးပွီး အဝတျအစား မလဲသေးဘဲ ကုတငျစောငျးတှငျ ထိုငျရငျး မှိုငျနသေညျ့ သူ့ကို သနားမိသညျ။ သူ့ကွညျ့ရတာ စိတျမသကျမသာ ဖွဈနပေုံ ရသညျ။ သူသတျကုနျးဆီ သှားရမယျ့ သဒေဏျကြ အကဉျြးသားလို မကျြနှာညှိုးနသေညျ။ ဒီလိုဆိုတော့လညျး ကြှနျတျော အတငျး မတိုကျတှနျးရကျပါ။ သူ့ခွရေငျးမှာ ထိုငျရငျး သူမကျြနှာကို မော့ကွညျ့သညျ။ လကျကလေးကို ဆုပျကိုငျလိုကျတော့ ရခေဲတမြှ အေးစကျနသေညျ။ “ ညီမ အရမျး ကွောကျနရေငျ အကို အခြိနျမရှေး ဖကျြလိုကျလို့ ရတယျ… စိတျမညဈနဲ့နျော… ရုပျရှငျကွညျ့နရေငျး ညီမက Stop ဆိုတာနဲ့ သူ လုံးဝ ရပျကို ရပျရမယျ သိလား… ” ခပျယဲ့ယဲ့ကလေး ပွုံးရငျး သူခေါငျးငွိမျ့သညျ။ သူ့လကျကို နမျးရငျး ကြှနျတေျာ့ ပါးနှငျ့ ကပျထားလိုကျသညျ။ သူသကျပွငျး ခဏခဏ ခနြပွေနျသညျ။ တဈမနကျလုံး အသံမထှကျ။ “ ညီမ အခု ဖကျြခငျြလညျး ရတယျနျော… အကို ဟနျလုပျပွောတာ မဟုတျဘူး… ညီမစိတျထဲ အဆငျသငျ့ ဖွဈတဲ့အထိ အကို ထပျစောငျ့နိုငျတယျ… ” “ညီမ မကွိုကျရငျ မလုပျတော့ပါဘူးလို့တော့ မပွောဘူး… ဒီနေ့ လကျမခံရငျလညျး မလုပျဖွဈမခငျြး တဈသကျလုံး ဂြီတိုကျနမှော မဟုတျလား…” သူ အသံထှကျလာသညျ။
ကြှနျတေျာ့ကို မကျြစောငျးထိုးရငျး ပွောသညျ။ သူပွောတဲ့အတိုငျးလညျး မှနျနသေဖွငျ့ ကြှနျတျော စပျဖွီးဖွီး ရယျပွလိုကျသညျ။ ကြှနျတျော ရယျတော့ သူပါ ပွုံးလာသညျ။ ကြှနျတေျာ့စိတျခမျြးသာမှုကို သူဘယျလောကျ အလေးထားလဲ ကြှနျတျော သိလိုကျပါသညျ။ “ကဲ… ညီမရေ ကိုကိုတို့ ကွိုရောကျအောငျ သှားကွမယျ… ကားထားခဲ့မှာဆိုတော့ ကွိုထှကျမှပဲ ကောငျးမယျ…” သူက ခေါငျးငွိမျ့ကာ အဝတျအစား လဲရနျပွငျသညျ။ ကုတငျပျေါက အတှငျးခံဘောငျးဘီကို လှမျးယူတော့ သူ့လကျကို ကြှနျတျော ဖမျးတားထားလိုကျသညျ။ သူက ကြှနျတေျာ့ကို ကွညျ့တော့ အဓိပ်ပာယျပါပါ ပွုံးပွလိုကျသညျ။ ‘ကိုကိုက လုပျပွီ’ ဆိုပွီး နှုတျခမျးကို ဆူကာ ကလေးလို ခွဆေောငျ့သညျ။ ကြှနျတျောက အလြှော့မပေးတော့ သကျပွငျးခပြွီး မထူးဘူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့ ခါးမှာပတျထားသော သဘကျကို ဖွညျခလြိုကျတော့သညျ။ သူမက ဂါဝနျအနီအပှငျ့ကလေးနှငျ့ အကငြ်္ီအနီလကျရှညျခေါငျးစှပျကလေးကို ဝတျလိုကျသညျ။ မကျြနှာကို မထူမပါးလေး ခွယျသသညျ။ သူအလှပွငျပွီး ကြှနျတေျာ့ဘကျ လှညျ့လာတော့ သူမလကျထဲ ပစ်စညျးတဈခု ထညျ့ပေးလိုကျသညျ။ လယောဉျပျေါ ညအိပျလြှငျ မကျြလုံးအုပျသော ခေါငျးစညျး တဈခု။
သူမက ဟမျးဘကျအိပျထဲ ထညျ့လိုကျပွီး ကြှနျတေျာ့ကို တငျးတငျးကပျြကပျြ ဖကျသညျ။ သူမ ရငျခုနျသံမြားက တဒုတျဒုတျ။ ဒဂုံစငျတာ အပျေါဆုံးထပျ ရုပျရှငျရုံရောကျတော့ ကြှနျတျော လကျမှတျဝယျဖို့ တနျးစီသညျ။ သူက တဈလမျးလုံး တိတျဆိတျပွီး ကြှနျတျော ပြောကျသှားမှာ စိုးရိမျနသေလို လကျမောငျးကိုသာ မလှတျတမျး ဖကျတှယျထားသညျ။ ကြှနျတေျာ့အလှညျ့မရောကျခငျ သူက တိုးတိုးလေး ကပျပွောသညျ။ “ ရုပျရှငျ မကွညျ့တော့ဘူး… ” ကြှနျတျော လနျ့သှားသညျ။ အခုပွနျမလို့လားဆိုတော့ သူ ခေါငျးခါသညျ။ “ ဒါဆို တဈခါတညျး တနျးသှားမလို့လား… ညီမ ဖွဈရဲ့လား… ” “ ရုပျရှငျရုံထဲမှာ လြှောကျလုပျနတော လူတှေ မွငျရငျ ပိုရှကျစရာကောငျးတယျ… ” “ ဒါဆိုလညျး ကိုကို သူလာရငျ ပွောလိုကျမယျနျော… ” သူမ ခေါငျးငွိမျ့သညျ။ ကြှနျတျောက သူ့ကို လကျတှဲဖွုတျကာ နရော ဝေးဝေးမှာ ထိုငျခိုငျးထားသညျ။ အဆငျမပွရေငျ ကြှနျတျောနဲ့ပဲ ကိစ်စအပွီး ရှငျးမညျ။
ပို့ထားသော ဓာတျပုံနှငျ့ တူသော ယောကျြားကို ဓာတျလှကေား အဝငျဝနားကနေ လမျးလြှောကျရငျး မသိမသာ အကဲခတျနသေညျ။ ထိုစဉျ ဓာတျပုံနှငျ့ ရုပျဆငျသော လူငယျတဈယောကျကို တှလေို့ကျသညျ။ အသကျက ၂၂၊ ၂၃ အရှယျ။ သူမနှငျ့ ရှယျတူ။ ကြှနျတေျာ့ထကျ ရှဈနှဈ ကိုးနှဈခနျ့ ငယျမညျ။ ဓာတျပုံထဲကထကျ အမြားကွီး တုတျခိုငျပွီး ဘျောဒီဖဈနှငျ့ ဂငျြးပွာဝတျထားသညျ။ အရပျလညျး ကြှနျတေျာ့လောကျ နီးနီးမွငျ့ပွီး ထုထညျက နှဈဆလောကျ ကွီးနသေညျ။ သခြောအောငျ ဓာတျပုံထဲမှာ မွငျဖူးသော အမှတျအသားတဈခု မကျြနှာမှာ ပါမပါ ခပျလှမျးလှမျးကနပေဲ အကဲခတျလိုကျသညျ။ သခြောပွီ။ သူသညျ ကြှနျတျောတို့ လငျမယားနှငျ့တှဖေို့ ခြိနျးထားသော လူငယျဖွဈသညျ။ ရငျခေါငျးထဲက အေးကနဲ ဖွဈသှားသညျ။ သူက ဟိုဟိုဒီဒီ ကွညျ့ကာ ကြှနျတျောတို့ကို ရှာနပေုံရသညျ။ ကြှနျတျောက ‘အကို ညီလေးကို တှရေ့ငျ လာနှုတျဆကျမယျ’လို့ ကွိုတငျခြိနျးထားခဲ့သညျ။ ကြှနျတျောတို့ ဘာပုံ ဘယျလိုဝတျလာမယျဆိုတာ သူမသိ။
“ ညီလေး ထှနျးထှနျးလား… အကိုပါ… ကိုမြိုး… ” “ ဟုတျကဲ့ အကို… ကြှနျတျော အခုပဲ ရောကျတာ… လကျမှတျ ကြှနျတျောပဲ ဝယျလိုကျမယျနျော အကို… ” “ မဝယျနဲ့တော့ ညီလေး… ညီလေးအမက ရုပျရှငျမကွညျ့တော့ဘူး… တဈခါတညျး တနျးသှားမယျတဲ့… ” ‘ညီလေးအမ’တဲ့…။ ကြှနျတေျာ့ပါးစပျက မစဉျးစားရဘဲ လှတျကနဲ ပွောထှကျသှားသညျ။ “ ဟုတျကဲ့ အကို… အကိုဘယျသှားခငျြလဲ… ” ကွံကွံဖနျဖနျ တှေးပူသညျ ဆိုခငျြဆို။ သူကွိုတငျရှေးထားသော ဟျောတယျထကျ အခု ဆုံပွီးမှ ရှေးသော ဟျောတယျအခနျးကို ပိုစိတျခသြဖွငျ့ ကွိုတငျမစီစဉျခိုငျးခဲ့။ ကြှနျတျောတို့ မသှားဖူးသော နာမညျရှိဟျောတယျတဈခုကို ရှေးခယျြဖွဈသညျ။ သူ့ကို မိနျးမထိုငျနသေော နရောကို ချေါလာလိုကျသညျ။ သုံးဦးသား ဆုံခြိနျမှာ ကြှနျတျော သူတို့နှဈယောကျစလုံးကို အကဲခတျကွညျ့သညျ။ မိနျးမက မကျြလှာခထြားသညျ။ ပေါငျပျေါက ဟမျးဘကျအိတျကွိုးကို အကွောငျးမဲ့ ဆုပျကိုငျနသေညျ။ မကွညျ့ရဲ ကွညျ့ရဲနှငျ့ မော့ကွညျ့သညျ။ ထှနျးထှနျးက ကြှနျတေျာ့မိနျးမကို သခြောကွညျ့နသေညျ။ သူတို့အကွညျ့ခငျြး ခဏဆုံသှားတော့ မိနျးမက ခကျြခငျြး မကျြနှာပွနျလှဲသှားသညျ။
သားကောငျကို ရှမှေ့ာတှနေ့ရေသော အဖိုသတ်တဝါ၏ ဆာလောငျမှု နဲ့ အကာအကှယျမဲ့ မသတ်တဝါတဈဦး၏ အားနှဲ့ကွောကျရှံ့မှုတို့ကို သူတို့အမူအယာမှာ အထငျးသား မွငျရသညျ။ သူက အလိုကျတသိပငျ မိနျးမနှငျ့ မကျြလုံးခငျြးဆုံအောငျ မကွညျ့တော့ဘဲ ကြှနျတျောတို့ ရှမှေ့ ဓာတျလှကေားဆီ လြှောကျသှားတော့သညျ။ သူလညျး ကားမယူလာ။ တက်ကစီတဈစီး ငှားလိုကျသညျ။ ဟျောတယျရောကျတော့ သူ့မှတျပုံတငျတဈခုတညျးနှငျ့ အခနျးယူသညျ။ ယောကျြားနှဈယောကျနဲ့ တညျးတော့ သူ့ကို မကောငျးတဲ့မိနျးမလိုလို အခနျးကို လိုကျပို့တဲ့ ဟျောတယျဝနျထမျးက ခိုးခိုးကွညျ့နသေညျ။ ထှနျးထှနျးက ‘နယျက လာတဲ့ အကိုလငျမယား နလေ့ညျခငျး ခဏနားခငျြလို့’ ဆိုပွီး ပွောနသေညျ။ မိနျးမရဲ့ သိက်ခာအတှကျ ကြှနျတျော သူ့ကို အမှတျပေးလိုကျသညျ။ အခနျးထဲရောကျတာနဲ့ ကုတငျပျေါ ကြှနျတျောတို့နှဈဦး ထိုငျခလြိုကျသညျ။ ထှနျးထှနျးက နံရံနားမှာ မတျတပျရပျရငျး ဝယျလာသော အအေးဘူးကို ဖောကျနသေညျ။
မိနျးမ ခေါငျးမဖျောတော့။ ကြှနျတေျာ့လကျမောငျးကိုလညျး အရငျကထကျပငျ မလှတျတမျး ဆုပျထားသညျ။ ကြှနျတျောလညျး သူ့ကို ဖကျထားရငျး ‘ရရဲ့လား’ တိုးတိုးမေးတော့ ခေါငျးငွိမျ့ပွသညျ။ “ ညီလေး လာထိုငျလေ ” ကြှနျတျောချေါလိုကျတော့ သူက မိနျးမဘေးမှာလာထိုငျသညျ။ အသားခငျြးမထိအောငျ ထိုငျပမေယျ့ မကျြလုံးမြားက မိနျးမကိုယျလုံးကို ကွညျ့နသေညျ။ မိနျးမအသကျရှုသံမြား မွနျလာသညျ။ လကျက ကြှနျတေျာ့လကျမောငျးကို ဖဈြညှဈရငျး ကြှနျတေျာ့ဘကျကို မကျြနှာလှညျ့ထားသညျ။ ဒီအတိုငျးထိုငျနတော ငါးမိနဈလောကျကွာသညျ။ လူသားသုံးဦးရှိတဲ့အခနျးလို့ မထငျရလောကျအောငျ ဆိတျငွိမျနသေညျ။ မိနျးမက စိတျကိုတငျးကာ စကား စပွောသညျ။ ‘ကိုကို သူ့ကို ထမငျးစားပွီးပွီလား မေးလိုကျ’တဲ့။ ဒီစကားက မီးစိမျးပွခွငျးလို့ပဲ ကြှနျတျော သိသညျ။ “ ညီလေးကို အမက ထမငျးစားပွီးပွီလားတဲ့ မေးနတေယျ ” “ ကြှနျတျော စားလာတယျ အမ… အမတို့ကော စားပွီးပွီလား ” ကြှနျတျောက သူ့ကို ကွညျ့ရငျး ခေါငျးငွိမျ့ အခကျြပေးလိုကျသညျ။ သူက မိနျးမရဲ့ လကျတဈဖကျကို အသာလေးဆုပျကိုငျလိုကျသညျ။ လကျကလေး တှနျ့ကနဲ ဖွဈသှားသညျ။ တှနျ့ရုံသာ တှနျ့နိုငျသညျ။ သူ့လကျဖမိုးလေးမှာ ချေါဆောငျရာသို့ မလူးသာ မလှနျ့သာ လိုကျပါသှားပွီး အနမျးတဈပှငျ့မှာ ရပျတနျ့သှားသညျ။
ထှနျးထှနျးလကျက မွှတေဈကောငျလို သူမပခုံးပျေါ တဖွညျးဖွညျး တကျလာသညျ။ သူမ ကွကျသီးထနတောကို ကြှနျတျော သိသညျ။ ကြှနျတျောဖကျထားသော လကျအပျေါမှ ကြျောကာ သူ့လကျက သူမပခုံးကို ဖကျလိုကျသညျ။ ကြှနျတျောက သူမ နှုတျခမျးကို စုပျတော့ ကွောကျစိတျကွောငျ့ သူမ မတုနျ့ပွနျနိုငျ။ ကြှနျတျော နမျးပွီးသှားတာနဲ့ ထှနျးထှနျးက သူမကို သူ့ဘကျ တဖွညျးဖွညျး ဆှဲလှညျ့လိုကျသညျ။ သူမ မကျြလုံးအဝိုငျးသားနှငျ့ ထှနျးထှနျးကို ကွညျ့ပွီး မကျြနှာလှဲရနျ ကွိုးစားသညျ။ ကြှနျတျော သူမကို ဖကျထားသော လကျကို လှတျပေးလိုကျသညျ။ ထိုအခါ သူမကိုယျလုံးလေးမှာ ကြှနျတေျာ့လကျထဲမှ ထှနျးထှနျးလကျထဲသို့ လုံးလုံးရောကျသှားတော့သညျ။ ထှနျးထှနျးက ကြှနျတေျာ့ကို မကွညျ့တော့။ သူမမကျြနှာကိုသာ တပျမကျစှာ ကွညျ့နသေညျ။ ကြှနျတျောပိုငျဆိုငျသော ခဈြဇနီးကို တစိမျးယောကျြားတဈယောကျက ကိုယျ့ရှမှေ့ာတငျ ဖကျနမျးလိုကျတော့သညျ။ သူမ အငျ့ကနဲ အသံမြားထှကျလာသညျ။ ထှနျးထှနျး၏ အနမျးမြားက သူမ၏ ပါးပွငျ လညျပငျး နားရှကျမြားပျေါကို တရစပျကရြောကျနသေညျ။
သူမ၏ နားနားကို ကပျကာ ကြှနျတျော မကွားနိုငျသော စကားမြားကိုလညျး တိုးတိုးပွောနသေညျ။ ဖိုသတ်တဝါတို့၏ ခြော့မွှူစကားမြား ဖွဈတာကို မကွားဘဲလညျး ကြှနျတျော သိသညျ။ ‘လြှာကွီးနဲ့ မလကျြနဲ့’လို့ သူမ ပွောသံတိုးတိုးလေးကို ကွားလိုကျသညျ။ စကားအဆုံးတှငျ သူမကို ထှနျးထှနျး သိမျးကြုံးဖကျပွီး နှုတျခမျးကို စုပျနမျးလိုကျသညျ။ သူမ တအငျးအငျး အသံထှကျနသေညျ။ လကျနှဈဘကျက ထှနျးထှနျး ရငျဘကျကို မတှနျးသာ တှနျးသာ ထောကျထားသညျ။ မိနျးမတဈယောကျက မိမိအရှကျအတှကျ အလိုအလြောကျ တုနျ့ပွနျခွငျးသာ။ ထှနျးထှနျးက သူမ နှုတျခမျးကို နမျးလိုကျ ခှာလိုကျနှငျ့ လကျက ကြောပွငျကို ပှတျသပျနရေငျး သူမအကငြ်္ီထဲသို့ လကျရောကျသှားကာ ကြောပွငျကို တရှရှ စမျးနပွေနျသညျ။ ထောကျကနဲ သူမ ဘျောလီခြိတျ ပွုတျသှားသညျ။ သူမ ပိုပွီး လူးလူးလှနျ့လှနျ့ ဖွဈလာသညျ။ ထှနျးထှနျးက သူမကို အဆကျမပွတျနမျးပွီး ကုတငျပျေါလှဲခလြိုကျတော့ သူမ ခွထေောကျက ကုတငျခွရေငျးမှာ တှဲလောငျးကနြသေညျ။ ထှနျးထှနျးလကျတဈဘကျက သူမလညျပငျးကို ဖကျထားသညျ။ သူမ မကျြလုံးစုံမှိတျပွီး ထှနျးထှနျးအနမျးကို ရှောငျဖို့ မကျြနှာလှဲထားသညျ။ စောစောက ကြောဘကျကမို့ သသေခြောခြာမမွငျရခဲ့။ ထှနျးထှနျးက သူမလညျတိုငျမှ ပါးပွငျအထိ လြှာနှငျ့လကျြနသေညျ။ ကြားကွီးတဈကောငျက သားသမငျကို ဖမျးပွီး လညျမြိုကို ခဲနသေလို။
ထှနျးထှနျးကနျြလကျတဈဘကျက သူမ ဝမျးဗိုကျခပျြခပျြလေးကို ပှတျနရေငျး အကငြ်္ီအတှငျးသို့ တကျလာသညျ။ သူ့လကျမြားက သူမ၏ ရငျသားမြားကို ဆုပျကိုငျနပွေနျသညျ။ ကြှနျတျောက အခွအေနကေို ရငျတဖိုဖိုနှငျ့သာ ကွညျ့နေ၏။ သူမအကငြ်္ီကို လှနျတငျလိုကျသညျ။ ဖွူဝငျးလုံးဝိုငျးသော ရငျသားနှဈမွှာမှာ အကာအကှယျမဲ့သှားသညျ။ ထှနျးထှနျးက ကြှနျတေျာ့ကို ရှိသညျဟုပငျ ထငျပုံမရ။ သူမနို့ကို ညှဈကိုငျပွီး တဈလုံးကို စို့ခလြိုကျတော့ သူမထံမှ အျောသံ ပီပီသသ စထှကျလာသညျ။ “ အ… အား… ကိုကိုရယျ… ” “ ခဈြလေး… ဘာဖွဈလို့လဲ… ရရဲ့လား… ” သူမ ပွနျမဖွနေိုငျ။ ကြှနျတေျာ့လကျကို ဖမျးကိုငျထားသညျ။ ‘ညီလေး ဖွညျးဖွညျးနျော’လို့ ကြှနျတျော သတိပေးတော့ သူက ခေါငျးငွိမျ့ပွသညျ။ သူမနားကပျကာ တဈခုခု ပွောပွနျသညျ။ မိနျးမက ခေါငျးကို ခါသညျ။ သို့နှငျ့ နို့ကို ကိုငျကာ စို့ပွနျသညျ။ လြှာဖြားဖွငျ့ နို့သီးခေါငျးမြားကို ကလိသညျ။ ရငျသားမြားက သူမ၏ ခံစားမူအကောငျးဆုံးးနရော ဖွဈတာကို သူသိသှားသညျ။
“ အ… အ… အငျ့… ဟငျ့… ” လကျတဈဘကျက သူမ ပေါငျကို အသာပှတျနရေငျး ဂါဝနျကို တဖွညျးဖွညျး လှနျတငျလိုကျသညျ။ ကြှနျတျော ရငျတှေ တုနျလာသညျ။ တဖွညျးဖွညျး ပှတျသပျရငျး ပေါငျရငျးနား လကျရောကျလာတော့ ခဏရပျသှားသညျ။ စို့နသေော နို့ကို ခဏလှတျပွီး ငုံ့ကွညျ့သညျ။ အတှငျးခံမပါသဖွငျ့ သူမ၏ ဖောငျးမို့နသေော အဖုတျမှာ အထငျးသား။ ပေါငျခွံမှာ အရညျမြားက ရှဲစိုနသေညျ။ ထှနျးထှနျးမကျြနှာတှငျ အံ့သွမှုနှငျ့အတူ ကနြေပျရိပျတှေ ပျေါလာသညျ။ ကြှနျတျော သူမ စောကျဖုတျကို ငုံ့လကျြလိုကျသညျ။ သူမ ဆတျကနဲ ကော့သှားသညျ။ ထှနျးထှနျး၏ ဆံပငျကိုဆုပျဆှဲလိုကျတာကို တှရေ့သညျ။ နို့ကို စို့တာနှငျ့ စောကျဖုတျကို လကျြတာ တဈပွိုကျနကျတညျး သူမ တဈခါမှ မခံဖူးဘူး။ နှဈနရောစလုံးက သူမအတှကျ အဓိက လိငျစိတျကို ပွငျးထနျစတေဲ့ နရောတှေ ဖွဈသညျ။ အခု စောကျဖုတျရော နို့ရော ကောငျးကောငျး နှိုးဆှခံနရေတဲ့အခါ ငါးတဈကောငျလို ထှနျ့ထှနျ့လူးနတေော့သညျ။ သူမ ဖီလငျတကျနပေမေယျ့ အခကျတှနေ့သေညျက ကြှနျတျော။ ခါတိုငျး သူမအျောသံကွားတာနဲ့ လီးက တငျးကနဲ မတျလာသညျ။
အခု ဘယျလိုမှ မာအောငျ လုပျလို့ မရဖွဈနသေညျ။ လိငျတံမတငျးတော့ ဒေါသဖွဈလာသညျ။ ဒေါသဖွဈလာတော့ ပိုပွီး စိတျသှငျးလို့ မရ ဖွဈလာတော့သညျ။ သူမ စောကျဖုတျကို လကျြကာ ကြှနျတျော လိငျတံ ပွနျမာလာအောငျ ကွိုးစားနတေုနျး ထှနျးထှနျးက သူမ ရငျဘတျပျေါ ခှထိုငျလိုကျသညျ။ သူ့ကိုယျလုံးကွီးနဲ့ နို့ပျေါဖိထိုငျတော့ အငျ့ကနဲအသံထှကျလာသညျ။ သူမ လကျနှဈဘကျကို သူ့လကျနှဈဘကျနှငျ့ကိုငျကာ ကုတငျပျေါတှငျ ဖိထားလိုကျသညျ။ ကြှနျတျောက စောကျဖုတျကို လကျြရငျးက ထှနျးထှနျး ဘာလုပျမညျကို ကွညျ့နသေညျ။ သူမ ညညျးသံမြား ဆိုငျလငျ့ဇာတပျလိုကျသလို တိုးသှားသညျ။ “ ညီလေး အတငျးမလုပျနဲ့နျော… ငိုလိမျ့မယျ… ” ကြှနျတျော ခွရေငျးမှ ထပွီး သတိပေးလိုကျသညျ။ ထှနျးထှနျးက အသာခေါငျးငွိမျ့ပွီး ပွုံးပွသညျ။ သူ့အပွုံးက အဓိပ်ပာယျ တဈခုခုပါသညျ။ ပိုငျနိုငျလှနျးသော အပွုံး။ သူမကို ကွညျ့တော့ ပါးစပျမှာ ထှနျးထှနျးလီးက တဈဝကျဝငျနသေညျ။ လကျနှဈဘကျက ကုတငျပျေါမှာ ဖိကပျခံနရေသျောလညျး တကယျသာ သူမ ငွငျးခငျြလြှငျ ခေါငျးကို တဈဘကျစောငျးလိုကျရုံသာ။ အခုတော့ သူမက အလိုကျသငျ့ ပါးစပျဟပေးထားသညျ။
ထှနျးထှနျးက ဒိုကျထိုးသလို သူမ လညျပငျးပျေါခှပွီး လီးကို ပါးစပျထဲသို့ ခါးအားနှငျ့ တဈခကျြခငျြး ဖိသှငျးနသေညျ။ ထှနျးထှနျး၏လီးမှာ သူမပါးစပျထဲသို့ တဈဝကျကြျောကြျောအထိ ဝငျလိုကျထှကျလိုကျ ဖွဈနသေညျ။ သူမက နှုတျခမျးလေး ဝိုငျးကာ ထှနျးထှနျးလီးကို သာသာလေး ငုံထားသညျ။ တဈခကျြ တဈခကျြ အာခေါငျထောကျမိသဖွငျ့ အငျ့ကနဲ ဖွဈဖွဈသှားသညျ။ အရှိနျရလာတော့ ထှနျးထှနျးက ခြုပျထားသော လကျကို ဖွပေေးလိုကျပွီး သူမ ခေါငျးကို ကိုငျလိုကျသညျ။ သူမ၏ လကျက ထှနျးထှနျး ပေါငျကို ခပျဖှဖှ ပွနျကိုငျသညျ။ ထှနျးထှနျးက သူမခေါငျးကို ထူကာ လီးကို သူမပါးစပျထဲသို့ တဆုံး ကော့သှငျးလိုကျတော့သညျ။ “ အှတျ… အငျ့… အငျ့… အငျး… ” ကြှနျတျော တယုတယ အမွဲနမျးသော နှုတျခမျး။ ကြှနျတေျာ့ကို ကနြေပျမှုရအောငျ ပွုစုတတျသော နှုတျခမျး။ အခုတော့ ကြှနျတျော လီးမတောငျနိုငျတာကိုလညျး မသိ။ တစိမျးယောကျြား၏ လီးကို ပါးစပျဖွငျ့ စုပျကာ အသုံးတျောခံနသေညျ။ ကိုယျယောကျြားကို ဘေးမှာထားပွီး တစိမျးယောကျြား၏ လီးကို စုပျနသေညျမှာ တျောရုံ လိငျစိတျကွှနရေုံနှငျ့ မဖွဈ။ ထှနျးထှနျးက သူမ ခေါငျးကို အသအေခြာကိုငျပွီး ပါးစပျကို စိတျကွိုကျလိုးနသေညျမှာ ကွေးစားမိနျးမတဈယောကျကို တနျအောငျ လိုးနသေညျ့အတိုငျးပငျ။ သူမပျေါခှထိုငျထားသညျ့ ထှနျးထှနျး၏ပေါငျကို သူမက မသိမသာ ဆုပျညှဈရငျး ပှတျသပျနခွေငျးက ဒီအခွအေနမှော လုံးဝပြျောဝငျသှားပွီဆိုတာကို ပွနသေညျ။
တစိမျးတဈယောကျက ကိုယျ့မိနျးမကို ဖာသညျမလို သဘောထားပွီး ကငျြ့နတောကို မွငျတော့ ကြှနျတေျာ့ရငျထဲတှငျ နာကငျြမှုနှငျ့အတူ အမညျမသိ ခံစားခကျြအသဈက ဘှားကနဲ ပျေါလာတော့သညျ။ ထှနျးထှနျးက ‘အကို လိုးတော့လေ’ ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ မေးငေါ့ပွတော့ ကြှနျတျော ခေါငျးကို လေးပငျစှာ ခါသညျ။ သူက ဘာကွောငျ့ ကြှနျတျော မလိုးတော့တာလဲ သိခငျြမှ သိမညျ။ ဂရုလညျး သိပျစိုကျမှာမဟုတျ။ သူက ကြှနျတေျာ့မိနျးမကို လိုးဖို့သာ စိတျအားထကျသနျနသေညျ။ “ ဒါဆို ကြှနျတျော အမကို လိုးတော့မယျ ” ရငျထဲ တဖဉျြးဖဉျြးဖွဈရုံမှတပါး ကြှနျတျော မတတျနိုငျ။ ထှနျးထှနျးက လီးကို သူမပါးစပျထဲမှ ဆှဲထုတျလိုကျကာ သူမ နှုတျခမျးကို လီးနှငျ့ နှဈခကျြ သုံးခကျြ တို့ပွီးမှ သူမ ပေါငျကွားထဲ ဝငျထိုငျလိုကျသညျ။ သူမကို ကွညျ့တော့ နှုတျခမျးမှာ အရညျကွညျမြား စိုရှဲနသေညျ။ သူမကို လိုးမှာ တခွားလူမှနျး သိလကျြနဲ့ သူမ ခွထေောကျတို့က မလှုပျမရှား ငွိမျသကျနသေညျ။ ပွတငျးပေါကျတံခါးနှဈခပျြကို တှနျးဖှငျ့လိုကျသလို ထှနျးထှနျးက သူမ ဒူးနှဈဘကျကို ကိုငျကာ ပေါငျကို ဖွဲခလြိုကျသညျ။ သူမက အလိုကျသငျ့ပငျ ပေါငျကို ဖွဲကားပေးနသေညျ။ သစ်စာမရှိသော စောကျဖုတျကွီးမှာ မကွာခငျဝငျလာမယျ့ လီးအသဈကို ကွိုဆိုနသေလို။ ထှနျးထှနျးက ဒဈဖြားနဲ့ သူမစောကျဖုတျကို မထိတထိ ကစားတော့ သူမ အသံထှကျလာသညျ။
ကြှနျတျောလကျြတုနျးက ပနေတေဲ့ တံတှေးတှကွေောငျ့ ခြောဆီမလိုအောငျ ခြောကြိနမှော သခြောသညျ။ ထှနျးထှနျးက လီးမထညျ့သေးဘဲ စိတျရှညျရှညျနှငျ့ သူမကို လိငျစိတျပွနျထအောငျ ကလိနသေညျ။ သူမ၏ အဓိကနရောမြားကို သူလလေ့ာသိရှိသလို ကောငျးကောငျးကွီး အသုံးခနြတေော့သညျ။ “ အငျး… အငျး အငျ့ အဟငျ့… ” သူမမကျြနှာ မရိုးမရှ ဖွဈလာသညျ။ မဝငျလာသေးသညျ့ လီးအသဈကို စောငျ့နသေလိုလို။ စောစောကပငျ လီးမစုပျခငျြလို့ အကွောကျအကနျ မိနျးကလေးသညျ အခုတော့ သိသိသာသာ အလိုးခံခငျြနပွေနျသညျ။ တစိမျးယောကျြားနှငျ့ အတူနပေေးရမှာကို ရှကျလို့ ငိုခဲ့သော မိနျးကလေးသညျ အခုတော့ ပွုသမြှ ခံမညျ့ အသငျ့အနအေထားမှာ ငွိမျသကျလကျြ။ ကြှနျတျော သူမကို ကွညျ့ပွီး တဈစုံတဈခုကို ဆုံးဖွတျလိုကျသညျ။ ထှနျးထှနျးနားကပျကာ တိုးတိုးလေး ပွောလိုကျသညျ။ သူမကတော့ စောကျဖုတျဝမှာ ကလိနတေဲ့ လီးကို အာရုံရောကျနသေဖွငျ့ ကွားမညျမဟုတျပါ။
“ အကို မတားမခငျြး ညီလေး အဆငျပွသေလောကျ ရှဆေ့ကျတိုးတော့… မငျးအမကို အရှကျကုနျအောငျ လုပျလိုကျတော့… ” “ ကြှနျတျော ခပျကွမျးကွမျး ပွောခိုငျးမယျ အမ မရှကျတော့အောငျ… ရလား အကို… ” “ ရတယျ… သူဖီးကောငျးရငျ ပွီးရော… ” “ အ…အား… အမေ့… ” ကြှနျတေျာ့ စကားမဆုံးသေးခငျမှာပငျ သူမ အျောညညျးပွီး ကော့သှားသညျ။ ကွညျ့လိုကျတော့ ထှနျးထှနျးဒဈဖြား သှငျးထားသညျ။ သူမ ညညျးနတေော့ ဒဈဖြားကို ဆကျမသှငျးဘဲ ပွနျထုတျလိုကျသညျ။ အစိကို ဒဈနဲ့ ထိုးဆှပွီး တဈခကျြ ပွနျသှငျးသညျ။ “ ဟငျ့… ဟငျ့… အ… အ ” ဒီတဈခါ ပွနျမထုတျ။ လီးထိပျဝသှငျးထားပွီး သူမပျေါ ဖိလှဲခလြိုကျသညျ။ ထှနျးထှနျး၏ ကိုယျလုံးကွီးအောကျတှငျ သူမ ခန်ဓာကိုယျလေးမှာ လုံးဝ ပြောကျကှယျနသေညျ။ ထှနျးထှနျးက သူမ နို့မြားကို ကုနျးစို့ပွီး ညှဈကိုငျသညျ။ ကုတငျခွရေငျးကနေ ကြှနျတျော ကွညျ့သညျ။ ထှနျးထှနျးက လီးကို အဖြားလေးသာ ထုတျခညျြ သှငျးခညျြလုပျနသေညျ။ ထှနျးထှနျး လီးက သူမ အရငျ အလိုးခံလိုကျရသော သီဟပစ်စညျးလို ပုံမှနျအရှယျမဟုတျ။
ပွုပွငျထားတာ မရှိပမေယျ့ နဂိုအတိုငျးကို တုတျခဲ မညျးနသေညျ။ “ ဟငျ့အငျး တျောပွီ… မပွောခငျြဘူး… ဟငျ့… ဟငျ့… အ… အ ” ထှနျးထှနျးအသံက တိုးနသေဖွငျ့ ကြှနျတျော မကွားရ။ သူမက ငွငျးနသေညျ။ ဒီတဈခါလညျး သူမ ကွာကွာငွငျးနိုငျမှာ မဟုတျကွောငျး စောစောက အတှအေ့ကွုံအရ ကြှနျတျော သိနသေညျ။ ထငျသညျ့အတိုငျး မိနဈပိုငျးအတှငျး သူမ ပွောထှကျလာပွနျသညျ။ သူမကို သူဘာတှေ ပွောခိုငျးနသေလဲ ကြှနျတျော သိလိုကျသညျ။ “ အား… ဟငျ့ ဟငျ့… အမကို လိုး…ပေးပါ… ” “……………. ” “ ဟငျ့… အလိုး… ခံခငျြ… ပါတယျ… အား… အား… အား… ” ထှနျးထှနျးသညျ လီးကို သူမစောကျဖုတျထဲသို့ စေးစေးပိုငျပိုငျ ဖိသှငျးလိုကျသညျ။ သူမ ရငျကော့သှားသညျ။ ရငျသားနှဈမွှာကတော့ ခကျြခငျြး ပှငျ့အာလာသညျ့ ကွာဖူးမြားလို မွငျ့တကျလာသညျ။ ထှနျးထှနျး၏ ရငျအုပျက သူမ ကော့ပြံမတကျသှားအောငျ သူ့ကိုယျလုံးကွီးနဲ့ အုပျမိုးကာ ဖိခလြိုကျသညျ။
ခါးအားဖွငျ့ ဖိကာ လီးကို သူမစောကျဖုတျထဲ မှနျမှနျကွီး သှငျးနတေော့သညျ။ သူမ၏ လကျမြား အိပျယာခငျးစကို ဆုပျကိုငျနရောမှ ထှနျးထှနျး ပခုံးပျေါကို အလိုလို ဖကျလာသညျ။ “ အား… အား… ဟငျ့… အငျ့… အား… နာတယျ… အား… ” အဆုံးစှနျသော ရငျခုနျမှုမြိုးနှငျ့အတူ ကြှနျတျော ခေါငျးတှေ ခြာခြာလညျလာသညျ။ မွငျကှငျးထဲမှာ ပီပီသသ တှနေ့ရေသညျက ကြှနျတေျာ့မိနျးမနှငျ့ သူစိမျးတဈယောကျ ခဈြရညျလူးကာ မွူးနကွေပုံ။ သူမ ထံမှ တဈခါမှ မကွားဖူးသော ညဈညမျးစကားလုံးမြားလညျး ထှကျပျေါလာသညျ။ ဒီလောကျထိ သူမ လှယျလှယျနှငျ့ ပြျောဝငျသှားမယျလို့ မထငျထားခဲ့။ ခံစားခကျြမဲ့တဲ့ သဈတုံးမဟုတျပမေယျ့ ဒီအခွအေနကေို ဒီလောကျမွနျမွနျ လကျခံနိုငျမယျလို့ မမြှျောလငျ့ထားခဲ့။ အခုတော့ သူမသညျ တစိမျးတဈယောကျကို နစေ့ဉျ လိုးနကြေ လငျယောကျြားလို လကျခံပွီး ဆကျဆံနသေညျ။
တစိမျးတဈယောကျအတှကျ ကကြေနြေပျနပျ မယားအလုပျခံနသေညျ။ ထှနျးထှနျးက အရှိနျအမြိုးမြိုး ပွောငျးကာ သူမကို လိုးသညျ။ ပုံစံအမြိုးမြိုး ပွောငျးကာ ဆကျဆံသညျ။ သူမကို ဆှဲထူကာ သူပေါငျပျေါမှာ ထိုငျဆောငျ့ခိုငျးသညျ။ ဘေးစောငျးခိုငျးပွီး နောကျမှ သှငျးသညျ။ မတျတပျရပျကာ သူမကို ခါးထဈခှငျခြီပွီး ဖကျလိုးသညျ။ ကုတငျဘေးက စားပှဲပျေါ ခွတေဈဘကျတငျ ရပျခိုငျးပွီး နောကျမှ ခါးကို ကိုငျဆောငျ့သညျ။ သုံးလေးမြိုးသာ သိမျသိမျမှမှေ့ေ့ လိုးတတျသော ကြှနျတေျာ့မှာ အငေးသား။ ဒီကွားထဲ တဈခကျြခကျြ သူမ ပွောသော စကားမြားက ရငျတုနျပနျးတုနျ ဖွဈစရာ။ မကျြနှာပူစရာ။ ရှကျစရာ။ ရမ်မကျမီးတို့ တရှိနျရှိနျ လောငျစရာ။ အဲကှနျးခနျးထဲမှာပငျ ကြှနျတေျာ့နဖူးစပျတှငျ ခြှေးမြား တှဲခိုလကျြ။ မိုးမမွငျလမေမွငျ ကာမဂုဏျတောမှာ ပြျောနကွေသူနှဈဦးမှာလညျး အရညျတို့ ခြှဲပဈြကာ တစိုစို။ မနကေ့အထိ အပွငျမှာ မမွငျဖူးသော ယောကျြားနှငျ့ မိနျးမသညျ အရငျးနှီးဆုံး အခွအေနမှော ယှကျနှယျဆကျဆံနကွေသညျ။
“ ………………… ” “ အား… အား… ကောငျးတယျ… ဟငျ့ဟငျ့… ခံလို့ ကောငျးတယျ… အ…. ” “…………………. ” “ ဟငျ့… ဘာလို့ အဲ့လိုပွောခိုငျးတာလဲ… အား… မပွောခငျြဘူး… ဟငျ့အငျး… အား… မလုပျပါနဲ့… နာတယျ… အဟငျ့… ” “ ………………… ” “ ဟာ… ရှကျတယျ… အား… အား… ဟငျ့… မဟုတျတာ… ဘာတှေ… ပွောခိုငျးနတောလဲ… အား… သပွေီ… အမ အဲ့လို… မဟုတျဘူး… အ…. အား…. ” “ …………………… ” “ အား… အား… ဟုတျတယျ… ဟငျ့… ဟငျ့… တူနပွေီ… ဟငျ့… ” “ ……………………… ပွောလေ… ပွောပါ… တူနတေယျမလား… ” “ ဟငျ့ ဟငျ့… ဟုတျပါတယျဆိုကှာ… အ… အား… မမေးနဲ့တော့… ” ကြှနျတျော သတိထားမိတော့ လိငျတံက ပွနျမာနလေပွေီ။ သို့သျော အရှိနျကောငျးနသေော စုံတှဲကို မနှောကျယှကျခငျြတော့။ ထှနျးထှနျးက သူမကို လေးဘကျကုနျးခိုငျးကာ ပုခုံးကို ကိုငျအားယူကာ သှငျးလိုကျသညျ။ ထို့နောကျ သူမ ခါးသေးသေးလေးကိုငျကာ ဆီးစပျနှငျ့ သူမတငျပါး တဈဖတျဖတျရိုကျသညျအထိ ဆောငျ့သှငျးနသေညျမှာ လီးတဈခုလုံး ဒုံးကညျြတဈစငျးလို ကြှတျထှကျ၍ သူမ ဗိုကျထဲပွေးဝငျသှားမတတျ ပွငျးထနျလှသညျ။
သူမမကျြနှာကတော့ နာကငျြမှု၊ သာယာမှု၊ ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားမှုတို့ ရသစုံပနျးခြီကားလို အရောငျပွေးနသေညျ။ “ ဖွနျး… ဖွနျး… ” “ အား… အ… နာတယျ… အား… ” သူမဖငျကို ထှနျးထှနျးက အားမပါ့တပါ ခပျစပျစပျလေး ရိုကျလိုကျသညျ။ အရသာပကျြလောကျအောငျ နာပုံမရတော့ ကြှနျတျော မတားမိ။ အတှငျးစိတျသဘောမှာ မိနျးမတဈဦး၏ ယောကျြားတဈဦးနှငျ့ ဆကျဆံရသော အရသာကို သူမနရောမှ ဝငျခံစားကာ ရူးသှပျမိခွငျးလား။ လိငျတူစိတျဝငျစားသော ဂေးတို့၏ စိတျမြိုးနှငျ့တော့ လားလားမှမတူတာ သခြောသညျ။ “ ဖွနျး… … ” “ အား… သပွေီ… နာတယျလို့… မရိုကျပါနဲ့… အား… အား… ” “ မရိုကျစခေငျြရငျ ကယျြကယျြပွောလိုကျလေ… မ… ကြှနျတျော စောစောက ပွောခိုငျးတာ… ” “ ဟငျ့… ဟငျ့အငျး… မဟုတျဘူး… အမ မဟုတျဘူး… ” “ ဖွနျး… ဖွနျး… ” ထှနျးထှနျး သူမ ဆံပငျကို ဆောငျ့ဆှဲပွီး နောကျမှ ဒူးနှငျ့တိုကျသလို ဖငျကို ဆောငျ့လိုကျသညျ။ သူမ မကျြလုံးပျေါမှ မကျြလုံးအုတျ ကြှတျလုမတတျ ဖွဈသှားသညျ။ သူမ ခါးကော့တကျလာတော့ ထှနျးထှနျးက နောကျမှ သိုငျးဖကျကာ ပှမေ့လိုကျသညျ။ လကျတဈဘကျက သူမ နို့ကို ညှဈရငျး တဈဘကျက စောကျဖုတျကို သာသာ ကလိသညျ။ သူမ ဂုတျပိုးနှငျ့ နားရှကျကို ရှိုကျနမျးရငျး ခြော့မွှူသညျ။ လီးကိုတော့ ဖွညျးဖွညျးသာ သှငျးရုံလေး သှငျးနသေညျ။
“ ပွောလိုကျပါ… နျော… မကလဲ… ” “ ဟငျ့… ဟငျ့… အ… အ… မပွောရဲဘူးလို့… ဟငျ့… ” “ ပွောလိုကျပါ… တကယျမဟုတျဘူးလေ… ပွောလိုကျရုံပဲ… မရှကျနဲ့နျော… မ… ” “ အ… အဟငျ့… အား… အား… ” ” ပွောလေ… မ… နျော… ” “ ဟငျ့ဟငျ့… ဖာသညျမလို… လိုးပေးပါ… … … … … ” သူမ နှုတျခမျး လှုပျရုံကလေး လှုပျသညျ။ အသံက မထှကျပမေယျ့ သူမပွောလိုကျတဲ့ စကားကို လူတိုငျး သိနိုငျလောကျသညျ။ ကြှနျတျော ကွကျသသေသှေားသညျ။ ရငျထဲတှငျ အမြိုးအမညျမသိသော ခံစားခကျြမြား ရောယှကျနသေညျ။ သူမကို ဒီကိစ်စမှာ အရှကျကုနျတဲ့အထိ လုပျဖို့ ကိုယျတိုငျ တောငျးဆိုတာမှနျသညျ။ ဒါပမေယျ့ သူမက ကြှနျတျော ပနျးတိုငျ သတျမှတျမြှျောလငျ့ထားတာထကျ အဝေးကွီး ခရီးလှနျသှားပွီ ဖွဈသညျ။ ကြှနျတျော မထုရဘဲ အလိုလို သုကျထပျထှကျပွနျသညျ။ ထှနျးထှနျးက ကုတငျအောကျဆငျးပွီး သူမကိုပါ ဆှဲခလြိုကျသညျ။ ကုတငျပျေါ လကျထောကျ ကုနျးခိုငျးပွီး စောစောကလို မွနျမွနျဆောငျ့လိုးပွနျသညျ။ ဒီတဈခါ စောစောကထကျ ပိုမွနျသညျ။ သူပွီးတော့မညျ။ သူမ အသံပြောကျမတတျ ပါးစပျကို အစှမျးကုနျဟကာ အသကျရှူနသေညျ။
“ အား… အား… အား… သပေါပွီ… အား… ” အားအပွငျးဆုံး တဈခကျြ ဆောငျ့အသှငျး၊ သူမ ကုတငျပျေါ မှောကျရကျလဲကသြှားသညျ။ ထှနျးထှနျးက ခကျြခငျြးပငျ ဆှဲထူကာ ကုတငျအောကျကို ဆှဲခသြညျ။ သူမ မတျတပျမရပျနိုငျ။ ထှနျးထှနျးခွရေငျးမှာ ဒူးခှထေိုငျကသြှားသညျ။ ထှနျးထှနျးက လီးကို သူမ ပါးစပျထဲ စှပျကနဲ ထညျ့လိုကျသညျ။ သူမ စုပျလညျး မစုပျနိုငျ၊ ထှေးလညျး မထှေးနိုငျအောငျ မောနတေော့ လီးကို ပွနျထုတျပွီး ဂှငျးထုသညျ။ အဖွဈအပကျြတှကေ မွနျဆနျလှနျးသညျ။ ထှနျးထှနျးက သူမမကျြလုံးပျေါမှမကျြလုံးအုတျ ကို ဆတျကနဲ ဆှဲခြှတျလိုကျသညျ။ သူမ မကျြလုံးဖှငျ့ကွညျ့တော့ ထှနျးထှနျးလီးကွီးက အရညျခြှဲမြား ကပျငွိလကျြ ဒဈနီကွီးမှာ အရပွေားထဲ ဝငျခညျြ ခေါငျးပွူခညျြ ဖွဈနတောကို မွငျသညျ။ ကွာကွာကွောကျခြိနျမရလိုကျ။ ထှနျးထှနျးက သူမခေါငျးကို ဆံပငျမှ ဆှဲယူကာ ပါးစပျထဲသို့ လီးကို သှငျးပေးလိုကျသညျ။ “ အားပါးပါး… အား… အငျး… ” ဆီးစပျနှငျ့ သူမ မကျြနှာကပျနသေညျ။ လညျခြောငျးအထိ နငျနသေဖွငျ့ ထှနျးထှနျးပေါငျကို လကျဖွငျ့ တှနျးလှတျသျောလညျး ကြားရဲစိတျဝငျနသေော ထှနျးထှနျးက သူမ ခေါငျးကို မလှတျဘဲ သူ့ဆီးစပျမှာ ဖိကပျထားသညျ။ သူမ မလူးမလှနျ့သာ ရုနျးရငျး တဈခကျြ နှဈခကျြခနျ့ ကော့တကျသှားသညျ။ မကျြနှာလေးမှာ သနားစဖှယျ ရှုံ့မဲ့နသေညျ။ ထှနျးထှနျးက မွငျပုံမရ။
ခေါငျးကို မော့ကာ အောငျနိုငျသူ စဈသူကွီးတဈယောကျလို အကောငျးဆုံးသော ပွီးမွောကျခွငျး အရသာထူးကို ခံစားနသေညျ။ “ မြိုခလြိုကျ အမ… မထှေးနဲ့နျော… မြိုခလြိုကျ… ” ထှနျးထှနျးလကျကို ဖွလြေော့လိုကျသညျနှငျ့ သူမ ခေါငျးကို ဘေးစောငျးကာ သုကျရညျမြားကို ထှေးခလြိုကျသညျ။ သုကျရညျမြားက တံတှေးနှငျ့ရောကာ သူမ ပါးစပျတှေ ပရေေ စီးကနြသေညျ။ ထှနျးထှနျးသုကျရညျမြား သူမ မြိုခမြိလား မမြိုခဘြူးလား သူမသာ အသိဆုံး ဖွဈမညျ။ ကြှနျတျောသိသညျက ဒါ သူမဘဝတှငျ ပထမဦးဆုံး သုကျရညျကို ပါးစပျထဲ အပနျးခံရခွငျး ဖွဈသညျ။ ရုပျရှငျထဲတှငျ မွငျနကြေ မွငျကှငျးပမေယျ့ အခု မငျးသမီးက ကိုယျ့မိနျးမ ဖွဈနသေညျ့အတှကျ ရငျထဲတှငျ တဆဈဆဈ နာကငျြမိသညျ။ ထှနျးထှနျးက သူပွောခိုငျးသညျ့အတိုငျး သူမကို ကွေးစားပွညျ့တနျဆာမတဈယောကျလို လိုးသှားသညျ။ လိုးရုံမက သူမကိုယျတိုငျ လိုလိုလားလား ဝနျခံ ပွောထှကျလာအောငျ မွှူဆှယျနိုငျခဲ့သညျ။ ဒါဟာ လကျဝှပှေဲ့တဈခုဆိုလြှငျ ထှနျးထှနျး၏ လိငျကိစ်စကြှမျးကငျြမှုက နိုငျ၍ သူမ၏ အရှကျသိက်ခာက ရှုံးသညျ။ လှနျဆှဲပှဲ တဈခုဆိုလြှငျ သူမ၏ ရမ်မကျအငျအားက ဆှဲရာသို့ သူမ၏ အသိတရားနှငျ့ ခန်ဓာတို့ အလြှော့ပေးလိုကျပါသှားရသညျ။
ထှနျးထှနျးက သငျတနျးဆရာဆိုလြှငျ သူမသညျ တဈကွိမျတညျးနှငျ့ သငျလှယျတတျလှယျသော သငျတနျးသူ ဖွဈပမေညျ။ ပြော့စပွုနပွေီဖွဈသော ထှနျးထှနျး၏ လီးကို ကိုငျပွီး သူမ စုပျပေးနသေညျ။ သုကျအခြှဲမြား ကုနျအောငျ မိနဈအနညျးငယျ ကွာတဲ့အထိ လီးအစုပျခံပွီးနောကျ ထှနျးထှနျးက သူ့လီးကို သူမ ပါးစပျထဲမှ ဆှဲထုတျလိုကျသညျ။ သူမကို ဖွညျးဖွညျး မထူကာ ကုတငျပျေါ တငျပေးပွီး သူက ရခြေိုးခနျးထဲ ဝငျသှားသညျ။ ‘ အကိုကော အဆငျပွရေဲ့လား’လို့ ဝတ်တရားကြေ မေးသှားသညျ။ သူမ ဘေးကို ကြှနျတျော ဝငျလှဲလိုကျတော့ သူမ ကြှနျတေျာ့ဘကျ လှညျ့လာသညျ။ ကြှနျတေျာ့မကျြနှာကို အကဲခတျကာ စူးစမျးကွညျ့သညျ။ ကြှနျတေျာ့မကျြနှာပျေါမှာ အဖွတေဈခုခု ရှာဖို့ သူမ ကွိုးစားသညျ။ သူမ စိတျလှတျလကျလှတျ ပွောမိတာတှကေို နောငျတရနတော သခြောသညျ။ မကျြရညျစမြား စီးကလြာပွနျသညျ။ “ ကိုကို ညီမကို ရှံသှားပွီမလား… ” သူမက စမဖကျရဲတော့ ကြှနျတျောကပဲ စဖကျထားလိုကျသညျ။
သူမ နဖူးကို နမျးရငျး ရှုပျပှနသေော ဆံပငျတှကေို သပျတငျပေးလိုကျသညျ။ “ ညီမရယျ… ကိုကိုက ညီမကို ဒီလို ခံစားစခေငျြလို့ ကိုကို ကိုယျတိုငျ စီစဉျခဲ့တာလေ… ဘာကို ကိုကိုက ရှံရမှာလဲ… ညီမက အကို့ဆန်ဒကို လိုကျလြောပွီး အဆငျပွအေောငျ အတူတူနပေေးတော့ ပိုပွီးတောငျ ခဈြသေးတယျ… တကယျပွောတာပါ… ” “ ဒါဆို သူလုပျနတေော့ ကိုကို ဘာလို့ ဝငျမလာတာလဲ… ” “ ကိုကို စိတျလှုပျရှားပွီး ဘယျလိုမှ ထောငျမရလို့ပါ… ကလေးကို ရှံလို့ မဟုတျဘူး… နျော… ” “ သူလုပျနတေုနျး ညီမပွောတဲ့ စကားတှကေို အတညျမယူနဲ့နျော… ကိုကိုတို့ စိတျကနြေပျအောငျ ပွောပေးတာ… ” ကြှနျတျော ပွုံးကာ ခေါငျးငွိမျ့လိုကျသညျ။ သူမ၏ အရှကျသိက်ခာအတှကျ သူမ၏ ကာကှယျဖွရှေငျးခကျြ မှနျသမြှတို့ကို ကြှနျတျော မတားဆီး။ အကြိုးမရှိသော အမှနျစကားထကျ သူမ၏ လိပျပွာလုံမှုက ပိုအရေးကွီးသညျ မဟုတျပါလား။
“ စောစောက ကောငျးလား… ” “ သညျနေ့ တဈရကျက တဈသကလုံးအတှကျ နောကျဆုံးပဲနျော ကိုကို… ကနြေပျတော့နျော… ” ကြှနျတျော ဘာမှမပွောဘဲ အသာပွုံးနသေညျ။ ထှနျးထှနျး ပွနျဝငျလာပွီး သူမ ဘေးတှငျ ဝငျလှဲသညျ။ ကြှနျတျောတို့ ခွုံထားသော စောငျကိုပါ ဆှဲယူခွုံလိုကျသညျ။ သူမက ထှနျးထှနျးဘကျကို လှညျ့ကွညျ့တော့ ထှနျးထှနျးက သူမပါးကို ရှတျကနဲ နမျးလိုကျသညျ။ သူမကို အလယျမှာထား ဖကျထားကွသညျ။ သူမ၏ နို့နှငျ့ အဖုတျကို အာသာပွေ ပှတျသပျကွရငျး ကြှနျတျောတို့ သုံးဦး တဈရေးအိပျကွသညျ။ အားလုံး ပငျပနျးနတေော့ ခဏလေးနှငျ့ အိပျပြျောသှားကွသညျ။ အိပျမကျထဲတှငျ မှောငျမညျးနသေော လှိုဏျခေါငျးတဈခုထဲသို့ ကြှနျတျောတို့ စီးသော ရထားက မဆုံးနိုငျအောငျ ခုတျမောငျးနသေညျ။ အပွငျလောကတှငျကော အလငျးမဲ့သညျ့ ခရီးစဉျတဈခုက ဘယျအခြိနျမှာ လမျးဆုံးပါမညျနညျး။
မိန်းမက အရမ်းရှက်တတ်သည်။ အတို အကျပ်တွေ ဘယ်တော့မှ မဝတ်။ ဒါပေမယ့် လိင်စိတ် ပြင်းသည်။ နမ်းရင် ကိုယ့်လျှာကို နာတဲ့အထိ စုပ်နေ ကိုက်နေကျ။ တစ်ရက် အပြင်မထွက်ခင် သူ့အဖုတ်ကို ကလိပြီး အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ပြန်ပေးမဝတ်ဘဲ အပြင်သွားဖို့ ပြောသည်။ တာမွေပလာဇာကို ကားနဲ့ မထွက်ဘဲ လိုင်းကား အတူတူ တိုးစီးသည်။ လင်မယားလို့ မထင်အောင် သူနဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ ရပ်သည်။ သူ့ကို တမင်ထောက်လှမ်းတဲ့သူ မပေါ်လာပေမယ့် တစ်ယောက်ယောက်က ကားတိုးရင်း သူ့နောက်ပိုင်းကို ပွတ်မိတိုင်း မျက်နှာက နီနီတက်လာသည်။ အတွင်းခံဘောင်းဘီတစ်ခုက ဘာမှမထူပေမယ့် သူ့အတွက် အကာအကွယ်မဲ့နေသလို ဖြစ်နေသည်။ ဒါ ပထမဆုံး သူ့ကို လမ်းစဖွင့် လေ့ကျင့်ပေးတဲ့နေ့။ မိတ္ထီလာကို အလုပ်ကိစ္စ သွားရတဲ့အခါ အဆင့်ခုန်တက်သွားသည်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း လင်မယား ပါလာသည်။ သူငယ်ချင်းမိန်းမက နယ်ခံ။ ဟော်တယ် အခန်း နှစ်ခန်းယူပေမယ့် ပထမည တစ်ခန်းတည်းမှာပဲ စုပြီး မအိပ်ခင်အထိ အလုပ်လုပ်ရင်း စကားစုပြောကြသည်။
ဒုတိယညမှာတော့ သူငယ်ချင်းမိန်းမက ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာပြီး သူ့အမေအိမ် သွားအိပ်ရသည်။ သူငယ်ချင်းကတော့ ကျွန်တော်တို့နှင့် ကျန်ခဲ့သည်။ သူ့နာမည်က သီဟပဲ ထားပါတော့။ ပထမညလိုပဲ ကျွန်တော်တို့က အလုပ်လုပ်၊ မိန်းမက ဝင်အာလူးဖုတ်သည်။ ဒီအထိ ဘာစိတ်ကူးမှ မရှိသေး။ မိန်းမ ရေချိုးပြီး ညဝတ်ဂါဝန်နဲ့ ကုန်းကုန်းကွကွ လုပ်နေတုန်း သူငယ်ချင်းက သူ့ဖင်ကို သေချာကြည့်ပြီး ကျွန်တော့်ဘက်ကို လှည့်ကာ လက်မထောင်ပြသည်။“ မင်းမိန်းမ အိုးက ကျစ်နေတာပဲ” လို့ တိုးတိုးပြောသည်။ သူငယ်ချင်းဆီက ဒီစကား ကြားလိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ဖျိုးဖျိုးဖျဉ်းဖျဉ်း ဖြစ်သွားသည်။ ခေါင်းထဲ ဖျတ်ကနဲ ပေါ်လာတဲ့အတိုင်း “တစ်ခါကြည့် ချမ်းဘီယာ နှစ်ဘူး တစ်ခါကိုင် ဘလတ် တစ်လုံး” လို့ ပြောလိုက်သည်။ ဒီလိုပြောမှ တက်သာဆုတ်သာ လုပ်လို့ ရမည်။ ကိုယ့်ကို တမျိုးမြင်မယ့်ကောင်မျိုးဆို စောက်ခွက်ပြောင်သလိုလို လျှောချလို့ ရသည်။ သူက “ ဂိုလ် ပါပေးမယ် ဖင်မယားနဲ့ တကယ်ကိုင်ပစ်မှာနော်” လို့ ပြောလာသည်။ ကျွန်တော် ရင်တွေ ခုန်လာသည်။
“လေနဲ့တော့ မလုပ်နဲ့ ပုလင်းအရင်ဝယ်” လို့ ပြောလိုက်တော့ ဒီကောင် သွားဝယ်သည်။ ပါလာတာက ဘလတ် တစ်လုံး။ “ငါ အားရအောင် နယ်မှာနော်” လို့ ခြိမ်းခြောက်သေးသည်။ ဒီကောင်နဲ့ ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်ရင်း နည်းနည်းစီသောက်ကြသည်။ မိန်းမက ဒီကောင့်ကို “ကိုသီဟက မိန်းမလစ်တာနဲ့ သောက်တော့တာပဲ… မတိုးတိုးနဲ့ ပြန်တိုင်မယ်”လို့ စနေသည်။ “မင်း ဒီညတော့ အခန်းမပြန်နဲ့ ဒီမှာဘဲ အိပ်လိုက်တော့”လို့ ပြောပြီး မိန်းမကို ကြည့်လိုက်တော့ ခေါင်းညိမ့်ပြသည်။ သူက ကျွန်တော်တို့ အကြံကို လုံးလုံး မရိပ်မိ။ ဒီကောင်က မူပြီး “မင်းတို့ လင်မယား မလွတ်လပ်ဘဲ နေဦးမယ်” ပြောတာတောင် မိန်းမက ဒီကောင့်ကို ဒီဘက်ခန်းမှာပဲ အိပ်ဖို့ ပြောနေသည်။ ကိုယ်ခံရမယ့်အကွက် ကိုယ်တိုင်ခင်းပေးနေသလိုပဲ။ ဒီလိုနဲ့ မိန်းမက စောအိပ်သွားသည်။ ကျွန်တော်နှင့် သီဟ သောက်ရင်း အလုပ်ဆက်လုပ်သည်။ သူက တော်တော် မကိုင်ချင်ရှာ။ “ဟေ့ရောင် ငါတကယ်ကိုင်မှာနော်” တဖွဖွ ပြောသည်။
မင်းမိန်းမ ကွိုင်ရှာရင် မင်းရှင်းဆိုတာကလည်း ပါသေး။ အခန်းမီးပိတ်ပြီး မိန်းမဘေး ဝင်လှဲကာ စောင်ခြုံလိုက်သည်။ ဒီကောင် ကျွန်တော့်ဘေးကို အသာကပ်လာသည်။ ကျွန်တော်က မိန်းမက ဖက်ရင်း ဂါဝန်ပေါ်ကနေ ပေါင်ကို ပွတ်ပေးနေသည်။ ပေါင်ကို ပွတ်ရင်း ဂါဝန်ပေါ်ကနေ စောက်ဖုတ်ကို အုပ်ကိုင်လိုက်တော့ မိန်းမ မျက်လုံးပွင့်လာသည်။ ဟိုကောင်ရှိတယ် သိသွားဦးမယ်ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ မျက်စပစ်သည်။ ကျွန်တော်က ဂရုမစိုက်။ ဂါဝန်တွန့်ကြေတဲ့အထိ သူ့စောက်ဖုတ်ကို ပွတ်ရင်း သူ့ကို ကြည့်တော့ မျက်လုံးတွေ ရွဲနေပြီ။ သူ့နားနားကပ်ပြီး “ငြိမ်ငြိမ်နေနော် မသိချင်ယောင်ဆောင်နေ၊ ပြီးမှ ပြောပြမယ်”လို့ တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်သည်။ မိန်းမက ကြောင်အမ်းအမ်း။ ဘာကို ဆိုလိုသလဲ မသိ။ ကျွန်တော် ဒီကောင့်လက်ကို ယူပြီး မိန်းမ စောက်ဖုတ်ပေါ် အသာတင်ပေးလိုက်သည်။
မိန်းမ ဆတ်ကနဲတုန်သွားပြီး မျက်လုံးပြူးကြည့်သည်။ ကျွန်တော်က အသာနေ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေလို့ ပြောတော့ မလုပ်နဲ့လို့ ခေါင်းယမ်းပြသည်။ ဒါပေမယ့် ဟိုကောင့်လက်ကို ဆွဲမဖယ် ကျွန်တော့်လက်ကိုသာ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားသည်။ ကျွန်တော် ရင်တွေ ခုန်ချက်က သေလောက်သည်။ မိန်းမကလည်း အတူတူပဲ ခုန်နေမှာ သေချာသည်။ ဟိုကောင် ဘာလုပ်နေတယ် မမြင်ရ။ မိန်းမ မျက်လုံးက တော်တော်စင်းလာပြီး နှုတ်ခမ်းလေးတွေဟကာ အသံတိုးတိုးထွက်လာတော့မှ ဒီကောင့်လက်ကို စမ်းကြည့်တော့ သကောင့်သားက ဂါဝန်ပေါ်က မကိုင်ဘဲ ဂါဝန်ကို လိပ်တင်ပြီး မိန်းမစောက်ဖုတ်ကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကို ကလိနေသည်။ ဒင်းလက်ကို ဖယ်ပြီး ကျွန်တော် စမ်းကြည့်တော့ သူ့စောက်ဖုတ်မှာ အရည်တွေ စိုကာ ပွဖောင်းနေလေပြီ။ မိန်းမကို တစ်ဖက်လှည့်ကာ ကျောပေးခိုင်းလိုက်သည်။ ဒီတစ်ခါ ပေးကိုင်လိုက်တော့ ဒီကောင်က မိန်းမဖင်ကို ညှစ်ညှစ်ပြီး ကိုင်သည်။ လက်ရဲဇက်ရဲနဲ့ ဖင်ကြားထဲအထိ လက်သွင်းကာ စောက်ဖုတ်ကိုပါ နှိုက်တော့သည်။ ပက်လက်တုန်းက စောက်ဖုတ်ကို ကလိရုံလေး ကလိလို့ ရတာ။
အခု သေသေချာချာ နှိုက်လည်းနှိုက်ကော မိန်းမ ငြီးသံ ရှိုက်သံတွေ တိုးတိုးလေးကနေ ကျယ်လာတော့သည်။ စောက်ဖုတ်နှိုက်တာ တစ်နာရီလောက် ကြာလာတော့ မိန်းမလည်း ကော့ပြီး မျော့နေတော့သည်။ ဒီကောင်က ငါမရတော့ဘူး ထည့်ချင်ပြီကွာလို့ ပြောတော့ ကျွန်တော် လန့်သွားသည်။ ဒီအချိန် ဆုံးဖြတ်ရတော့မည်။ ရှေ့ဆက်တိုးမှာလား ရပ်သင့်ပြီလား။ မိန်းမကတော့ လက်အသစ်မို့ အရည်တွေ ထွက်တာ ဖင်တစ်ခုလုံးရွှဲနေပြီ။ ဒီလောက် မြန်မြန် ခွင့်ပြုရင် မိန်းမသိက္ခာကျသွားမှာကို သွားတွေးမိသည်။ တော်ပြီလေကွာ ကိုယ်ပါကိုယ်ထုတော့လို့ တားလိုက်သည်။ “ငါ သူ့အပေါ် ထုတ်ချင်တယ်ကွာ အဲ့ဒါတော့ ခွင့်ပြု ”လို့ လုပ်လာပြန်သည်။ သူ့ကြည့်တော့လည်း အရှိန်က တက်နေပြီ။ ဗမာကားတွေထဲက မုဒိမ်းကျင့်ခါနီး လူကြမ်းရုပ်မျိုး။ မိန်းမကတော့ ခါးကို ကွေးလိုက် ကော့လိုက်နဲ့ အိပ်ယာခင်းစကို ကိုင်ကာ ဘေးစောင်းလဲနေတုန်း။ ခွင့်ပြုသင့်မပြုသင့် စဉ်းစားနေတုန်း ဒင်းက ကျွန်တော့်ဘေးကနေ ထပြီး ကျွန်တော့်ကို ကျော်ခွပြီး အလယ်ကို ဝင်သည်။ မထည့်နဲ့လို့ ကျွန်တော် ခပ်တင်းတင်းပြောတော့ ခေါင်းငြိမ့်သည်။
သူခဏ စောက်ဖုတ်ကို ဆက်နှိုက်ပြီး လီးကို မိန်းမ ဖင်ကြားထဲ ဖြဲထည့်ကာ အဖုတ်ဝကို ထိုးဆွကလိနေပုံရသည်။ တကယ် လိုးနေတဲ့အတိုင်း ခါးကို ကော့ကော့ထိုးနေတော့ စောက်ဖုတ်ထဲ တကယ်သွင်းနေတာလား ထင်ပြီး ရင်တဖိုဖို ဖြစ်ရသည်။ မိန်းမ အသက်ရှုသံတွေကလည်း စောစောကထက် သိသိသာသာ မြန်လာတာ အတိုင်းသားကြားရသည်။ ဒီကောင် ကွင်းထုရင်း ဆတ်ကနဲ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ခါးကော့ထိုးလိုက်တာကို သတိထားမိလိုက်သည်။ ကျွန်တော်ခေါင်းထောင်ကြည့်တော့ ဒင်းက မိန်းမ ပခုံးကိုတောင် အားယူကိုင်ထားသည်။ စောင်ကို ကိုက်ထားတဲ့ကြားက မိန်းမ အော်သံ တစ်ချက် ကျယ်ကျယ် ထွက်လာသည်။ နှစ်ယောက်စလုံး ခဏ ငြိမ်သွားပြီး သကောင့်သားက ကျွန်တော့်ကို ဘေးကို ပြန်ကျော်လာလိုက်သည်။ လက်နဲ့ စမ်းလိုက်တော့ မိန်းမ ဖင်ကြားထဲမှာ သုက်ရည်တွေ အများကြီး။ ဒီကောင့်ကို မေးတော့ ဖင်ကြားထဲပဲ ထည့်တာ စောက်ဖုတ်ထဲ လီးမသွင်းဘူး ပြောသည်။ တကယ်က စောက်ဖုတ်ဝမှာလည်း အရည်တွေ အများကြီး။
စောစောက အင့်ကနဲ မိန်းမ အော်လိုက်တာ ဒီကောင်ထည့်တာလို့ပဲ ထင်သည်။ (နောက်ပိုင်း) မိန်းမကို ပြန်မေးတော့လည်း မထည့်ဘူး လက်နဲ့ပဲ ကိုင်တာလို့ ပြောပြန်သည်။ မိန်းမပြောတာ လည်း မယုံရ။ ဟိုကောင်က သူဖင်ကြားထဲအထိ ထည့်တယ် ဝန်ခံထားတဲ့ဟာ။ ဒါ ကျွန်တော်နဲ့ မိန်းမရဲ့ ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံပဲ ဆိုပါတော့။ အလုပ်ကိစ္စ မိတ္ထီလာကို ခရီးထွက်တုန်းက အတွေ့အကြုံနောက်ပိုင်း တံခါးတစ်ချပ် ပွင့်သွားသလို။ တံခါးအပြင်မှာ လမ်းမကြီးကို ဖြူးနေသည်။ မိန်းမဘက်ကတော့ ဒီကိစ္စကို တစ်ခါမှ ထပ်မပြောပေမယ့် သူ့စိတ်ထဲမှာ စွဲနေတယ်ဆိုတာ သေချာသည်။ သူ့ကို လိုးနေရင်း အရှိန်ရလာတဲ့အခါ ‘ဟိုတခါက သီဟ ညီမကို တကယ် လိုးသွားတယ် မဟုတ်လား မှန်မှန်ဖြေပါ ကိုကို သိချင်လို့’ ဟု မေးကြည့်သည်။ အဲ့လို မေးလိုက်တိုင်း သူ မျက်လုံးပွင့်လာကာ တအင်းအင်းနဲ့ ပိုပြီး အသက်ရှုမြန်လာသည်။ ပါးစပ်က မဖြေဘဲ ခေါင်းခါပြသည်။ တစ်ညမှာတော့ ကောင်းကောင်းလိုးပေးနေရင်း တမျိုး အရဲစွန့်ပြီး မေးကြည့်သည်။
“ကိုကို့ကို အမှန်အတိုင်း ပြောနော်… ညီမက သစ္စာဖောက်တာမှ မဟုတ်တာ… ကိုကိုပြောလို့ ငြိမ်ခံနေပေးလိုက်ရတာပဲ… ညီမကို သီဟနောက်ကနေ လိုးသွားတယ် မဟုတ်လား…” သူနှုတ်ခမ်းကို ခဏကိုက်ကာ ငြိမ်နေသည်။ ကျွန်တော် သူ့ကို ဘေးစောင်းထားကာ သီဟ နောက်မှ နေတုန်းက ပုံစံမျိုး ပြောင်းလိုက်သည်။ လီးကို မသွင်းသေးဘဲ အဖုတ်ဝနှင့် တေ့ထားသည်။ လက်နဲ့ နို့တွေကို အသာကိုင်ရင်း လည်ပင်းကို သိုင်းဖက်လိုက်သည်။ လီးကို အဖုတ်ထဲ ဒစ်ဝမြုပ်ရုံသွင်းပြီး နားနားကို ကပ်ကာ သီဟထည့်တာ ဒီလောက်ဝင်လား လို့ မေးလိုက်သည်။ ပြန်မဖြေ။ လီးကို ပြန်ထုတ်ပြီး တစ်ဝက်ကျော်ကျော် မြုပ်တဲ့အထိ တဆစ်ဆစ် ထပ်သွင်းလိုက်သည်။ သူ တဟင့်ဟင့် ဖြစ်လာသည်။ “ညီမ ဖြေပါဦး… သူထည့်တာ ဒီလောက် ဝင်လား” “ကိုကိုက ညီမကို ဘာလို့ သူများ ပေးလုပ်တာလဲ… မချစ်လို့လား… ” သူ့လေသံက ခပ်တိုးတိုး ခပ်ယဲ့ယဲ့။ “မဟုတ်ပါဘူး ညီမရယ်… ချစ်တာပေါ့… အမှန်အတိုင်းပြောနော် သူ ဘယ်လောက်ထိလုပ်လဲ… အထဲကို ဝင်သလား… ” “ ထည့်မှတော့… ဟင့်… ဝင်တာပေါ့ ကိုကိုရယ်… ” ကျွန်တော် လီးရည်ပင် ထွက်လုလု ဖြစ်သွားသည်။ ရင်ထဲတွင် အေးခနဲ ရှိန်းကနဲ။
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းက ကျွန်တော့်မိန်းမစောက်ဖုတ်ထဲထိ လီးဝင်အောင် ထည့်သွားခဲ့တယ်တဲ့။ သူ့ကို ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်ရင်း ပက်လက်ပြန်လှန်လိုက်တော့ သူက မျက်နှာလွှဲထားသည်။ စောစောကစကားအတွက် ရှက်နေတာ ဖြစ်မည်။ “သေချာပြောပါဦး ကလေးရယ်… သူပြောတော့ သူက ဖင်ကြားထဲမှာ ညှပ်ထားရုံပဲတဲ့… တကယ် သွင်းလိုက်လို့လား… ” “သွင်းတယ်… … ဟိုးအထဲထိ…။ ကိုကိုက ပေးထည့်လိုက်တာကိုး… သူများက ညီမကို အထဲထိဝင်အောင် သွင်းသွားတာပေါ့လို့… ” သူ့ ညုတုတု အသံအဆုံးမှာ ကျွန်တော် သူ့ခါးကိုကိုင်ကာ အပြင်းဆုံးဆောင့်ရင်း လီးရည်များ အကုန်အစင် ထွက်တဲ့အထိ ညှစ်သွင်းလိုက်သည်။ သူက ကျွန်တော့်ကို ပြန်ဖက်ရင်း ခြေထောက်က ကျွန်တော့်ခါးကို ခွလိုက်သည်။ သူစိတ်ကျေနပ်မှ တုန့်ပြန်တတ်သည့် အမူအရာဖြစ်သည်။ သူ့ကို ပထမဦးဆုံးစလိုးရတုန်းကလို ရင်ခုန်မှုမျိုး ခံစားနေရသည်။ “ ညီမကို သီဟ လိုးသွားတာပေါ့… ” “ ဟုတ်တယ် ကိုသီဟ ညီမကို တကယ် လိုးသွားတာ… ” “ ဒါဆို သူ့ လီးရည်တွေ… ညီမ စောက်ဖုတ်ထဲ ထည့်သွားလား…” သူက ကျွန်တော့်မျက်နှာကို ကြည့်သည်။
မျက်လုံးမှိတ်ကာ ခေါင်းငြိမ့်လိုက်ပြီး ချက်ချင်းပဲ ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းကို အငမ်းမရ စုပ်နမ်းတော့သည်။ ဒီတစ်ခါ သူ့အနမ်းတွေ အရင်ကထက် ရမက်ပြင်းလှသည်။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ပွေ့ဖက်ထားလိုက်သည်။ ကျွန်တော့် ခေါင်းထဲမှာတော့ အတွေးပေါင်းများစွာ။ သူများလင်နဲ့နေမည့် ကိစ္စ သူ့ကို စည်းရုံးရသည်မှာ လုံးဝ မလွယ်။ သီဟနှင့် ဖြစ်ခဲ့သည့်ကိစ္စဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း သူ့ကို အထန်မိန်းမ အဖြစ်နေကြည့်ဖို့ ပြောပြလိုက်ရင် လွယ်လွယ်ကူကူနှင့် ခေါင်းငြိမ့်မည် ထင်ခဲ့သည်မှာ တက်တက်စင်အောင် မှားသွားသည်။ သူ့စွပ်စွဲချက်အချို့က ကျွန်တော်က သူ့ကို မချစ်လို့ တန်ဖိုးမထားလို့ ဆိုတာမျိုး၊ ကျွန်တော်က နောက်တစ်ယောက်ရှာချင်လို့ သူ့ကို သစ္စာအရင်ဖောက်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတာမျိုး၊ သူက ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ မိန်းမစားမျိုး မဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုး။ ဘယ်မိန်းမကောင်းမှ ဒါမျိုး လက်ခံနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုး။ အစုံပါပဲ။ ဒီစွပ်စွဲချက်တွေက ပြင်းထန်သည်။ ဒီအတွက် ကျွန်တော်လိုတာ စိတ်ရှည်မှုနဲ့ အချိန်သာ ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော် သေချာအပိုင် သိထားတဲ့အချက်က သူက ကိုယ့်ယောက်ျားကလွဲပြီး တစိမ်းယောက်ျားတွေအပေါ် လုံးဝ လိင်စိတ်ကင်းမဲ့နေတဲ့ စက်ရုပ်မမဟုတ်။ သွေးနဲ့သားနဲ့ ခံစားချက်တွေ ရှိတဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ မိန်းမမျိုး။ ကျွန်တော့်ဆန္ဒတစ်ခုတည်းအတွက် သူလိုက်လျောရရင် သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံး နာကျင် ခံစားနေရတော့မည်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် လိုချင်တာက တစိမ်းယောက်ျားနှင့် အတူတူနေရန် သူကိုယ်တိုင် ရင်ခုန်လှုပ်ရှား စိတ်ပါခြင်း ဖြစ်သည်။ သူ့ကို နှစ်ဦးတည်း အတူတူရှိတိုင်း ပြောပြသည်။ များသောအားဖြင့် အတူတူနေပြီးချိန် ရင်ခွင်ထဲမှာ ဖက်ထားရင်း ပြောဖြစ်သည်။ ဖောက်ပြန်တယ် မဖောက်ပြန်ဘူးဆိုတာ စိတ်က အဓိကကျကြောင်း၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကြည်ဖြူသော ယောက်ျားတစ်ယောက်က ပြုစုယုယတာကို လက်ခံတာ သစ္စာဖောက်ရာမကျကြောင်း တဖွဖွ ပြောပြသည်။
အချိန်ပိုင်းလေး အတူတူနေပြီး နောက်ပိုင်း လူမှုရေး ပတ်သက်မှုမရှိရင် ဘာအမည်းစက်မှ မဖြစ်နိုင်တာကို သူယုံအောင် ခဏခဏ ပြောရသည်။ အကျဉ်းချုပ်ပြောရလျှင် ကန့်သတ်ချက် အချို့နှင့် သူ ခေါင်းငြိမ့်ခဲ့သည်။ တကယ်တမ်းက သူလက်ခံအောင် ကျွန်တော် ပြောဆို စည်းရုံးရတာ တစ်နှစ်ခွဲလောက် ကြာခဲ့သည်။ တစ်ခါတလေ စည်းရုံးလို့ ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့တောင် စိတ်ပျက်ခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော်က ရန်အဖြစ် မခံ။ မပြောဘဲလည်း မနေ။ သူမတတ်သာလို့ လိုက်လျောရတဲ့အနေအထားမျိုး ဖြစ်အောင်လည်း ကျွန်တော်က လမ်းကြောင်းပေးထားသည်။ ဒါမှ သူ့လိပ်ပြာ သူလုံမှာ ဖြစ်သည်။ သူ့ကို တစ်ဖက်က စည်းရုံးရင်း တစ်ဖက်က ပါတနာကို ရှာရသည်။ တကယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် အရင်က လုပ်လိုက်တာ လသာတုန်း ဗိုင်းငင်ခဲ့ခြင်းသာ။ ကြိုတင်ပြီး ဘာအစီအစဉ်မှ မရှိ။ အခု တကယ် ကျကျနန လုပ်မယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲ အစစအရာရာအတွက် တွေးပူရသည်။ ပထမဆုံး စဉ်းစားမိတာက အတွင်းရေး။
သမ္ဘာရင့် ဆရာသမားများက အတွင်းသိ အစင်းသိ ဝါသနာတူအတွဲကိုသာ ရှာဖို့ ရေးထားပေမယ့် ကိုယ်က ကိစ္စပြီးရင် ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက် ကိုယ့်ဘဝထဲက ပျောက်သွားမယ့်သူကို ပိုလိုချင်သည်။ နယ်မတူတဲ့သူ ရရင် ပိုကောင်းမည်။ နောက်တစ်ခုက ကိုယ့်ပြောစကား နားထောင်မယ့်သူ။ ဒါကတော့ ကိုယ့်ထက် ငယ်တဲ့သူကို ရှာရင် ပိုကောင်းမည်ဟု သွေးထဲက ပြောနေသည်။ ကိုယ့်မိန်းမကို အနိုင်အထက် လုပ်လို့ ကိုယ်က ကာကွယ်ပေးနိုင်မည့် အနေအထားမျိုး။ နောက်တစ်ခုက ရောဂါကင်းမကင်း။ ဒါကတော့ အန္တရာယ်အကြီးဆုံးနဲ့ ညှိရအခက်ဆုံး အနေအထား ဖြစ်သည်။ ဖေ့ဘုတ်မှ ကိုလင်းလင်း၊ ကိုဂျက် စတဲ့သူတွေကို အနည်းငယ် မေးမြန်းဖြစ်သည်။ ကျန်တဲ့သူတွေ အချင်းချင်းပြောကြတဲ့ အတွေ့အကြုံကိုလည်း ရသလောက် မှတ်သားရသည်။ နောက်ဆုံး ကိုယ့်ဘက်က မလုံခြုံဘဲ ဘာမှ မလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားလိုက်သည်။ ဂရုတစ်ခုမှာ ပို့စ်အစမ်း စတင်လိုက်တော့ လူငယ် ခုနစ်ယောက် ဆက်သွယ်လာသည်။ ကျွန်တော်က အသက်အစိတ်အောက် ကန့်သတ်ချက်နှင့် တင်ထားတာ ဖြစ်သည်။
ဒါမှ ကိုယ့်ထက်ငယ်ပြီး မိန်းမနှင့် ရွယ်တူ ဖြစ်သွားမည်။ မျက်နှာပုံနှင့် ကိုယ်လုံးပုံတွေ ပို့ခိုင်းသည်။ နှစ်ခါ သုံးခါ ပို့ခိုင်းသည်။ အဆင်မပြေလျှင် နှမျောမနေ။ ကိုယ့်ဘက်က ဘာပုံမှ မပို့။ အပြင်မှာ ယောက်ျားချင်းတွေ့မည်။ တွေ့တဲ့အခါ မိန်းမပုံပြမည်။ ကြိုက်ရင် ရှေ့ဆက်တိုး မကြိုက်ရင် ပြန်ရုံ။ ပုံတော့ မပို့ပေးနိုင်။ ဒါက မောက်မာတာ မဟုတ်၊ ကိုယ့်မိန်းမလုံခြုံရေးအတွက် အပြည့်အဝ ဦးစားပေးခြင်းသာ။ တချို့က ဒီလိုတောင် မေးသည်။ ‘ခင်ဗျား မိန်းမကို ကျုပ်က တကယ်လိုးမှာနော် တကယ်ပေးလိုးမှာလား…’ အဲ့ဒီအကောင်တော့ ဂျောင်းပေတော့။ ဘာမှ မလုပ်ဖူးတာ သေချာသည်။ အပြောအဆို အဆင့်ရှိတဲ့အထဲက ပင်ကို ယဉ်ကျေးပုံရတဲ့သူ၊ ဟန်ဆောင်စကား မပြောတတ်သူသုံးဦး ကို စိတ်နဲ့ ယာယီရွေးထားလိုက်သည်။ အရိုင်းအစိုင်းကို မိန်းမ ပေးရလောက်အောင် မရူးသွပ်သေး။ တကယ်တမ်း ရွေးလိုက်တော့ မိန်းမကိုယ်လုံးပုံကို ရွေးလိုက်တဲ့ ညီလေးဆီ ပို့ပေးလိုက်သည်။
အပြင်မှာ အရင် ရုပ်ရှင်အတူတူ ကြည့်မည်။ မိန်းမကို အလယ်မှာ ထားပြီး ထု ခိုင်းမည်။ မိန်းမ စိတ်ပါလာမှ ဟော်တယ် ဆက်သွားမည်။ အလုပ်မဖြစ်လို့ ပြန်ရရင် စိတ်မဆိုးကြေး။ လူရွေးလို့ ရလာတော့ သူ့ကို ကောင်လေးဓာတ်ပုံ ပြလိုက်သည်။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် သူ့မျက်နှာ ချွေးစေးတွေပျံလာသည်။ တကယ်လက်တွေ့ မိမိကို လိုးတော့မယ် တစိမ်းယောက်ျားရဲ့ ပုံ။ ကောင်လေးက ပစ္စည်းက ကိုယ့်ထက်တုတ်နေသည်။ မလုပ်ပါနဲ့လား ကိုကိုရယ် ညီမကို မသနားဘူးလားလို့ ပြောသေးသည်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါ ခေါင်းငြိမ့်ဖူးထားတော့ ကျွန်တော် တစ်ရက်နှစ်ရက် ချွဲလိုက်ရုံနဲ့ လက်ခံသွားသည်။ ညီမ အဆင်မပြေရင် ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး ပြန်ရုံပေါ့လို့ စိတ်အေးအောင် ပြောထားသည်။ ချိန်းထားသည့်နေ့ မရောက်ခင် ရက်များတွင် သူ တစ်ရက်မှ ဂနာမငြိမ်။ ကျွန်တော်လည်း အဲ့ဒီနေ့မှ စပြီး မလိုးတော့ဘဲ ဆွရုံဆွပေးပြီး အိပ်ယာဝင်သည်။ သူ့ကို မရိုးမရွဖြစ်နေအောင် ပုံကို ပြပြပြီး အဖုတ်ကို ကလိပေးသည်။ သို့နှင့် ချိန်းထားသည့် ရက်ကို ရောက်လာတော့သည်။ ဒီနေ့အတွက် ရှိသမျှအလုပ်ကိစ္စတွေ အကုန် ရှင်းထားသည်။ ဒီနေ့က ကျွန်တော်နှင့် ချစ်ဇနီးအတွက် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အကောင်းဆုံး အမှတ်တရ ဖြစ်မှာ သေချာသည်။
ရေချိုးပြီး အဝတ်အစား မလဲသေးဘဲ ကုတင်စောင်းတွင် ထိုင်ရင်း မှိုင်နေသည့် သူ့ကို သနားမိသည်။ သူ့ကြည့်ရတာ စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်နေပုံ ရသည်။ သူသတ်ကုန်းဆီ သွားရမယ့် သေဒဏ်ကျ အကျဉ်းသားလို မျက်နှာညှိုးနေသည်။ ဒီလိုဆိုတော့လည်း ကျွန်တော် အတင်း မတိုက်တွန်းရက်ပါ။ သူ့ခြေရင်းမှာ ထိုင်ရင်း သူမျက်နှာကို မော့ကြည့်သည်။ လက်ကလေးကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်တော့ ရေခဲတမျှ အေးစက်နေသည်။ “ ညီမ အရမ်း ကြောက်နေရင် အကို အချိန်မရွေး ဖျက်လိုက်လို့ ရတယ်… စိတ်မညစ်နဲ့နော်… ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရင်း ညီမက Stop ဆိုတာနဲ့ သူ လုံးဝ ရပ်ကို ရပ်ရမယ် သိလား… ” ခပ်ယဲ့ယဲ့ကလေး ပြုံးရင်း သူခေါင်းငြိမ့်သည်။ သူ့လက်ကို နမ်းရင်း ကျွန်တော့် ပါးနှင့် ကပ်ထားလိုက်သည်။ သူသက်ပြင်း ခဏခဏ ချနေပြန်သည်။ တစ်မနက်လုံး အသံမထွက်။ “ ညီမ အခု ဖျက်ချင်လည်း ရတယ်နော်… အကို ဟန်လုပ်ပြောတာ မဟုတ်ဘူး… ညီမစိတ်ထဲ အဆင်သင့် ဖြစ်တဲ့အထိ အကို ထပ်စောင့်နိုင်တယ်… ” “ညီမ မကြိုက်ရင် မလုပ်တော့ပါဘူးလို့တော့ မပြောဘူး… ဒီနေ့ လက်မခံရင်လည်း မလုပ်ဖြစ်မချင်း တစ်သက်လုံး ဂျီတိုက်နေမှာ မဟုတ်လား…” သူ အသံထွက်လာသည်။
ကျွန်တော့်ကို မျက်စောင်းထိုးရင်း ပြောသည်။ သူပြောတဲ့အတိုင်းလည်း မှန်နေသဖြင့် ကျွန်တော် စပ်ဖြီးဖြီး ရယ်ပြလိုက်သည်။ ကျွန်တော် ရယ်တော့ သူပါ ပြုံးလာသည်။ ကျွန်တော့်စိတ်ချမ်းသာမှုကို သူဘယ်လောက် အလေးထားလဲ ကျွန်တော် သိလိုက်ပါသည်။ “ကဲ… ညီမရေ ကိုကိုတို့ ကြိုရောက်အောင် သွားကြမယ်… ကားထားခဲ့မှာဆိုတော့ ကြိုထွက်မှပဲ ကောင်းမယ်…” သူက ခေါင်းငြိမ့်ကာ အဝတ်အစား လဲရန်ပြင်သည်။ ကုတင်ပေါ်က အတွင်းခံဘောင်းဘီကို လှမ်းယူတော့ သူ့လက်ကို ကျွန်တော် ဖမ်းတားထားလိုက်သည်။ သူက ကျွန်တော့်ကို ကြည့်တော့ အဓိပ္ပာယ်ပါပါ ပြုံးပြလိုက်သည်။ ‘ကိုကိုက လုပ်ပြီ’ ဆိုပြီး နှုတ်ခမ်းကို ဆူကာ ကလေးလို ခြေဆောင့်သည်။ ကျွန်တော်က အလျှော့မပေးတော့ သက်ပြင်းချပြီး မထူးဘူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့ ခါးမှာပတ်ထားသော သဘက်ကို ဖြည်ချလိုက်တော့သည်။ သူမက ဂါဝန်အနီအပွင့်ကလေးနှင့် အင်္ကျီအနီလက်ရှည်ခေါင်းစွပ်ကလေးကို ဝတ်လိုက်သည်။ မျက်နှာကို မထူမပါးလေး ခြယ်သသည်။ သူအလှပြင်ပြီး ကျွန်တော့်ဘက် လှည့်လာတော့ သူမလက်ထဲ ပစ္စည်းတစ်ခု ထည့်ပေးလိုက်သည်။ လေယာဉ်ပေါ် ညအိပ်လျှင် မျက်လုံးအုပ်သော ခေါင်းစည်း တစ်ခု။
သူမက ဟမ်းဘက်အိပ်ထဲ ထည့်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဖက်သည်။ သူမ ရင်ခုန်သံများက တဒုတ်ဒုတ်။ ဒဂုံစင်တာ အပေါ်ဆုံးထပ် ရုပ်ရှင်ရုံရောက်တော့ ကျွန်တော် လက်မှတ်ဝယ်ဖို့ တန်းစီသည်။ သူက တစ်လမ်းလုံး တိတ်ဆိတ်ပြီး ကျွန်တော် ပျောက်သွားမှာ စိုးရိမ်နေသလို လက်မောင်းကိုသာ မလွတ်တမ်း ဖက်တွယ်ထားသည်။ ကျွန်တော့်အလှည့်မရောက်ခင် သူက တိုးတိုးလေး ကပ်ပြောသည်။ “ ရုပ်ရှင် မကြည့်တော့ဘူး… ” ကျွန်တော် လန့်သွားသည်။ အခုပြန်မလို့လားဆိုတော့ သူ ခေါင်းခါသည်။ “ ဒါဆို တစ်ခါတည်း တန်းသွားမလို့လား… ညီမ ဖြစ်ရဲ့လား… ” “ ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ လျှောက်လုပ်နေတာ လူတွေ မြင်ရင် ပိုရှက်စရာကောင်းတယ်… ” “ ဒါဆိုလည်း ကိုကို သူလာရင် ပြောလိုက်မယ်နော်… ” သူမ ခေါင်းငြိမ့်သည်။ ကျွန်တော်က သူ့ကို လက်တွဲဖြုတ်ကာ နေရာ ဝေးဝေးမှာ ထိုင်ခိုင်းထားသည်။ အဆင်မပြေရင် ကျွန်တော်နဲ့ပဲ ကိစ္စအပြီး ရှင်းမည်။
ပို့ထားသော ဓာတ်ပုံနှင့် တူသော ယောက်ျားကို ဓာတ်လှေကား အဝင်ဝနားကနေ လမ်းလျှောက်ရင်း မသိမသာ အကဲခတ်နေသည်။ ထိုစဉ် ဓာတ်ပုံနှင့် ရုပ်ဆင်သော လူငယ်တစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်သည်။ အသက်က ၂၂၊ ၂၃ အရွယ်။ သူမနှင့် ရွယ်တူ။ ကျွန်တော့်ထက် ရှစ်နှစ် ကိုးနှစ်ခန့် ငယ်မည်။ ဓာတ်ပုံထဲကထက် အများကြီး တုတ်ခိုင်ပြီး ဘော်ဒီဖစ်နှင့် ဂျင်းပြာဝတ်ထားသည်။ အရပ်လည်း ကျွန်တော့်လောက် နီးနီးမြင့်ပြီး ထုထည်က နှစ်ဆလောက် ကြီးနေသည်။ သေချာအောင် ဓာတ်ပုံထဲမှာ မြင်ဖူးသော အမှတ်အသားတစ်ခု မျက်နှာမှာ ပါမပါ ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေပဲ အကဲခတ်လိုက်သည်။ သေချာပြီ။ သူသည် ကျွန်တော်တို့ လင်မယားနှင့်တွေ့ဖို့ ချိန်းထားသော လူငယ်ဖြစ်သည်။ ရင်ခေါင်းထဲက အေးကနဲ ဖြစ်သွားသည်။ သူက ဟိုဟိုဒီဒီ ကြည့်ကာ ကျွန်တော်တို့ကို ရှာနေပုံရသည်။ ကျွန်တော်က ‘အကို ညီလေးကို တွေ့ရင် လာနှုတ်ဆက်မယ်’လို့ ကြိုတင်ချိန်းထားခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ ဘာပုံ ဘယ်လိုဝတ်လာမယ်ဆိုတာ သူမသိ။
“ ညီလေး ထွန်းထွန်းလား… အကိုပါ… ကိုမျိုး… ” “ ဟုတ်ကဲ့ အကို… ကျွန်တော် အခုပဲ ရောက်တာ… လက်မှတ် ကျွန်တော်ပဲ ဝယ်လိုက်မယ်နော် အကို… ” “ မဝယ်နဲ့တော့ ညီလေး… ညီလေးအမက ရုပ်ရှင်မကြည့်တော့ဘူး… တစ်ခါတည်း တန်းသွားမယ်တဲ့… ” ‘ညီလေးအမ’တဲ့…။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်က မစဉ်းစားရဘဲ လွတ်ကနဲ ပြောထွက်သွားသည်။ “ ဟုတ်ကဲ့ အကို… အကိုဘယ်သွားချင်လဲ… ” ကြံကြံဖန်ဖန် တွေးပူသည် ဆိုချင်ဆို။ သူကြိုတင်ရွေးထားသော ဟော်တယ်ထက် အခု ဆုံပြီးမှ ရွေးသော ဟော်တယ်အခန်းကို ပိုစိတ်ချသဖြင့် ကြိုတင်မစီစဉ်ခိုင်းခဲ့။ ကျွန်တော်တို့ မသွားဖူးသော နာမည်ရှိဟော်တယ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ဖြစ်သည်။ သူ့ကို မိန်းမထိုင်နေသော နေရာကို ခေါ်လာလိုက်သည်။ သုံးဦးသား ဆုံချိန်မှာ ကျွန်တော် သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကို အကဲခတ်ကြည့်သည်။ မိန်းမက မျက်လွှာချထားသည်။ ပေါင်ပေါ်က ဟမ်းဘက်အိတ်ကြိုးကို အကြောင်းမဲ့ ဆုပ်ကိုင်နေသည်။ မကြည့်ရဲ ကြည့်ရဲနှင့် မော့ကြည့်သည်။ ထွန်းထွန်းက ကျွန်တော့်မိန်းမကို သေချာကြည့်နေသည်။ သူတို့အကြည့်ချင်း ခဏဆုံသွားတော့ မိန်းမက ချက်ချင်း မျက်နှာပြန်လွှဲသွားသည်။
သားကောင်ကို ရှေ့မှာတွေ့နေရသော အဖိုသတ္တဝါ၏ ဆာလောင်မှု နဲ့ အကာအကွယ်မဲ့ မသတ္တဝါတစ်ဦး၏ အားနွဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတို့ကို သူတို့အမူအယာမှာ အထင်းသား မြင်ရသည်။ သူက အလိုက်တသိပင် မိန်းမနှင့် မျက်လုံးချင်းဆုံအောင် မကြည့်တော့ဘဲ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့မှ ဓာတ်လှေကားဆီ လျှောက်သွားတော့သည်။ သူလည်း ကားမယူလာ။ တက္ကစီတစ်စီး ငှားလိုက်သည်။ ဟော်တယ်ရောက်တော့ သူ့မှတ်ပုံတင်တစ်ခုတည်းနှင့် အခန်းယူသည်။ ယောက်ျားနှစ်ယောက်နဲ့ တည်းတော့ သူ့ကို မကောင်းတဲ့မိန်းမလိုလို အခန်းကို လိုက်ပို့တဲ့ ဟော်တယ်ဝန်ထမ်းက ခိုးခိုးကြည့်နေသည်။ ထွန်းထွန်းက ‘နယ်က လာတဲ့ အကိုလင်မယား နေ့လည်ခင်း ခဏနားချင်လို့’ ဆိုပြီး ပြောနေသည်။ မိန်းမရဲ့ သိက္ခာအတွက် ကျွန်တော် သူ့ကို အမှတ်ပေးလိုက်သည်။ အခန်းထဲရောက်တာနဲ့ ကုတင်ပေါ် ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦး ထိုင်ချလိုက်သည်။ ထွန်းထွန်းက နံရံနားမှာ မတ်တပ်ရပ်ရင်း ဝယ်လာသော အအေးဘူးကို ဖောက်နေသည်။
မိန်းမ ခေါင်းမဖော်တော့။ ကျွန်တော့်လက်မောင်းကိုလည်း အရင်ကထက်ပင် မလွတ်တမ်း ဆုပ်ထားသည်။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို ဖက်ထားရင်း ‘ရရဲ့လား’ တိုးတိုးမေးတော့ ခေါင်းငြိမ့်ပြသည်။ “ ညီလေး လာထိုင်လေ ” ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တော့ သူက မိန်းမဘေးမှာလာထိုင်သည်။ အသားချင်းမထိအောင် ထိုင်ပေမယ့် မျက်လုံးများက မိန်းမကိုယ်လုံးကို ကြည့်နေသည်။ မိန်းမအသက်ရှုသံများ မြန်လာသည်။ လက်က ကျွန်တော့်လက်မောင်းကို ဖျစ်ညှစ်ရင်း ကျွန်တော့်ဘက်ကို မျက်နှာလှည့်ထားသည်။ ဒီအတိုင်းထိုင်နေတာ ငါးမိနစ်လောက်ကြာသည်။ လူသားသုံးဦးရှိတဲ့အခန်းလို့ မထင်ရလောက်အောင် ဆိတ်ငြိမ်နေသည်။ မိန်းမက စိတ်ကိုတင်းကာ စကား စပြောသည်။ ‘ကိုကို သူ့ကို ထမင်းစားပြီးပြီလား မေးလိုက်’တဲ့။ ဒီစကားက မီးစိမ်းပြခြင်းလို့ပဲ ကျွန်တော် သိသည်။ “ ညီလေးကို အမက ထမင်းစားပြီးပြီလားတဲ့ မေးနေတယ် ” “ ကျွန်တော် စားလာတယ် အမ… အမတို့ကော စားပြီးပြီလား ” ကျွန်တော်က သူ့ကို ကြည့်ရင်း ခေါင်းငြိမ့် အချက်ပေးလိုက်သည်။ သူက မိန်းမရဲ့ လက်တစ်ဖက်ကို အသာလေးဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်။ လက်ကလေး တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားသည်။ တွန့်ရုံသာ တွန့်နိုင်သည်။ သူ့လက်ဖမိုးလေးမှာ ခေါ်ဆောင်ရာသို့ မလူးသာ မလွန့်သာ လိုက်ပါသွားပြီး အနမ်းတစ်ပွင့်မှာ ရပ်တန့်သွားသည်။
ထွန်းထွန်းလက်က မြွေတစ်ကောင်လို သူမပခုံးပေါ် တဖြည်းဖြည်း တက်လာသည်။ သူမ ကြက်သီးထနေတာကို ကျွန်တော် သိသည်။ ကျွန်တော်ဖက်ထားသော လက်အပေါ်မှ ကျော်ကာ သူ့လက်က သူမပခုံးကို ဖက်လိုက်သည်။ ကျွန်တော်က သူမ နှုတ်ခမ်းကို စုပ်တော့ ကြောက်စိတ်ကြောင့် သူမ မတုန့်ပြန်နိုင်။ ကျွန်တော် နမ်းပြီးသွားတာနဲ့ ထွန်းထွန်းက သူမကို သူ့ဘက် တဖြည်းဖြည်း ဆွဲလှည့်လိုက်သည်။ သူမ မျက်လုံးအဝိုင်းသားနှင့် ထွန်းထွန်းကို ကြည့်ပြီး မျက်နှာလွှဲရန် ကြိုးစားသည်။ ကျွန်တော် သူမကို ဖက်ထားသော လက်ကို လွှတ်ပေးလိုက်သည်။ ထိုအခါ သူမကိုယ်လုံးလေးမှာ ကျွန်တော့်လက်ထဲမှ ထွန်းထွန်းလက်ထဲသို့ လုံးလုံးရောက်သွားတော့သည်။ ထွန်းထွန်းက ကျွန်တော့်ကို မကြည့်တော့။ သူမမျက်နှာကိုသာ တပ်မက်စွာ ကြည့်နေသည်။ ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်သော ချစ်ဇနီးကို တစိမ်းယောက်ျားတစ်ယောက်က ကိုယ့်ရှေ့မှာတင် ဖက်နမ်းလိုက်တော့သည်။ သူမ အင့်ကနဲ အသံများထွက်လာသည်။ ထွန်းထွန်း၏ အနမ်းများက သူမ၏ ပါးပြင် လည်ပင်း နားရွက်များပေါ်ကို တရစပ်ကျရောက်နေသည်။
သူမ၏ နားနားကို ကပ်ကာ ကျွန်တော် မကြားနိုင်သော စကားများကိုလည်း တိုးတိုးပြောနေသည်။ ဖိုသတ္တဝါတို့၏ ချော့မြှူစကားများ ဖြစ်တာကို မကြားဘဲလည်း ကျွန်တော် သိသည်။ ‘လျှာကြီးနဲ့ မလျက်နဲ့’လို့ သူမ ပြောသံတိုးတိုးလေးကို ကြားလိုက်သည်။ စကားအဆုံးတွင် သူမကို ထွန်းထွန်း သိမ်းကျုံးဖက်ပြီး နှုတ်ခမ်းကို စုပ်နမ်းလိုက်သည်။ သူမ တအင်းအင်း အသံထွက်နေသည်။ လက်နှစ်ဘက်က ထွန်းထွန်း ရင်ဘက်ကို မတွန်းသာ တွန်းသာ ထောက်ထားသည်။ မိန်းမတစ်ယောက်က မိမိအရှက်အတွက် အလိုအလျောက် တုန့်ပြန်ခြင်းသာ။ ထွန်းထွန်းက သူမ နှုတ်ခမ်းကို နမ်းလိုက် ခွာလိုက်နှင့် လက်က ကျောပြင်ကို ပွတ်သပ်နေရင်း သူမအင်္ကျီထဲသို့ လက်ရောက်သွားကာ ကျောပြင်ကို တရွရွ စမ်းနေပြန်သည်။ ထောက်ကနဲ သူမ ဘော်လီချိတ် ပြုတ်သွားသည်။ သူမ ပိုပြီး လူးလူးလွန့်လွန့် ဖြစ်လာသည်။ ထွန်းထွန်းက သူမကို အဆက်မပြတ်နမ်းပြီး ကုတင်ပေါ်လှဲချလိုက်တော့ သူမ ခြေထောက်က ကုတင်ခြေရင်းမှာ တွဲလောင်းကျနေသည်။ ထွန်းထွန်းလက်တစ်ဘက်က သူမလည်ပင်းကို ဖက်ထားသည်။ သူမ မျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီး ထွန်းထွန်းအနမ်းကို ရှောင်ဖို့ မျက်နှာလွှဲထားသည်။ စောစောက ကျောဘက်ကမို့ သေသေချာချာမမြင်ရခဲ့။ ထွန်းထွန်းက သူမလည်တိုင်မှ ပါးပြင်အထိ လျှာနှင့်လျက်နေသည်။ ကျားကြီးတစ်ကောင်က သားသမင်ကို ဖမ်းပြီး လည်မျိုကို ခဲနေသလို။
ထွန်းထွန်းကျန်လက်တစ်ဘက်က သူမ ဝမ်းဗိုက်ချပ်ချပ်လေးကို ပွတ်နေရင်း အင်္ကျီအတွင်းသို့ တက်လာသည်။ သူ့လက်များက သူမ၏ ရင်သားများကို ဆုပ်ကိုင်နေပြန်သည်။ ကျွန်တော်က အခြေအနေကို ရင်တဖိုဖိုနှင့်သာ ကြည့်နေ၏။ သူမအင်္ကျီကို လှန်တင်လိုက်သည်။ ဖြူဝင်းလုံးဝိုင်းသော ရင်သားနှစ်မြွှာမှာ အကာအကွယ်မဲ့သွားသည်။ ထွန်းထွန်းက ကျွန်တော့်ကို ရှိသည်ဟုပင် ထင်ပုံမရ။ သူမနို့ကို ညှစ်ကိုင်ပြီး တစ်လုံးကို စို့ချလိုက်တော့ သူမထံမှ အော်သံ ပီပီသသ စထွက်လာသည်။ “ အ… အား… ကိုကိုရယ်… ” “ ချစ်လေး… ဘာဖြစ်လို့လဲ… ရရဲ့လား… ” သူမ ပြန်မဖြေနိုင်။ ကျွန်တော့်လက်ကို ဖမ်းကိုင်ထားသည်။ ‘ညီလေး ဖြည်းဖြည်းနော်’လို့ ကျွန်တော် သတိပေးတော့ သူက ခေါင်းငြိမ့်ပြသည်။ သူမနားကပ်ကာ တစ်ခုခု ပြောပြန်သည်။ မိန်းမက ခေါင်းကို ခါသည်။ သို့နှင့် နို့ကို ကိုင်ကာ စို့ပြန်သည်။ လျှာဖျားဖြင့် နို့သီးခေါင်းများကို ကလိသည်။ ရင်သားများက သူမ၏ ခံစားမူအကောင်းဆုံးးနေရာ ဖြစ်တာကို သူသိသွားသည်။
“ အ… အ… အင့်… ဟင့်… ” လက်တစ်ဘက်က သူမ ပေါင်ကို အသာပွတ်နေရင်း ဂါဝန်ကို တဖြည်းဖြည်း လှန်တင်လိုက်သည်။ ကျွန်တော် ရင်တွေ တုန်လာသည်။ တဖြည်းဖြည်း ပွတ်သပ်ရင်း ပေါင်ရင်းနား လက်ရောက်လာတော့ ခဏရပ်သွားသည်။ စို့နေသော နို့ကို ခဏလွှတ်ပြီး ငုံ့ကြည့်သည်။ အတွင်းခံမပါသဖြင့် သူမ၏ ဖောင်းမို့နေသော အဖုတ်မှာ အထင်းသား။ ပေါင်ခြံမှာ အရည်များက ရွှဲစိုနေသည်။ ထွန်းထွန်းမျက်နှာတွင် အံ့သြမှုနှင့်အတူ ကျေနပ်ရိပ်တွေ ပေါ်လာသည်။ ကျွန်တော် သူမ စောက်ဖုတ်ကို ငုံ့လျက်လိုက်သည်။ သူမ ဆတ်ကနဲ ကော့သွားသည်။ ထွန်းထွန်း၏ ဆံပင်ကိုဆုပ်ဆွဲလိုက်တာကို တွေ့ရသည်။ နို့ကို စို့တာနှင့် စောက်ဖုတ်ကို လျက်တာ တစ်ပြိုက်နက်တည်း သူမ တစ်ခါမှ မခံဖူးဘူး။ နှစ်နေရာစလုံးက သူမအတွက် အဓိက လိင်စိတ်ကို ပြင်းထန်စေတဲ့ နေရာတွေ ဖြစ်သည်။ အခု စောက်ဖုတ်ရော နို့ရော ကောင်းကောင်း နှိုးဆွခံနေရတဲ့အခါ ငါးတစ်ကောင်လို ထွန့်ထွန့်လူးနေတော့သည်။ သူမ ဖီလင်တက်နေပေမယ့် အခက်တွေ့နေသည်က ကျွန်တော်။ ခါတိုင်း သူမအော်သံကြားတာနဲ့ လီးက တင်းကနဲ မတ်လာသည်။
အခု ဘယ်လိုမှ မာအောင် လုပ်လို့ မရဖြစ်နေသည်။ လိင်တံမတင်းတော့ ဒေါသဖြစ်လာသည်။ ဒေါသဖြစ်လာတော့ ပိုပြီး စိတ်သွင်းလို့ မရ ဖြစ်လာတော့သည်။ သူမ စောက်ဖုတ်ကို လျက်ကာ ကျွန်တော် လိင်တံ ပြန်မာလာအောင် ကြိုးစားနေတုန်း ထွန်းထွန်းက သူမ ရင်ဘတ်ပေါ် ခွထိုင်လိုက်သည်။ သူ့ကိုယ်လုံးကြီးနဲ့ နို့ပေါ်ဖိထိုင်တော့ အင့်ကနဲအသံထွက်လာသည်။ သူမ လက်နှစ်ဘက်ကို သူ့လက်နှစ်ဘက်နှင့်ကိုင်ကာ ကုတင်ပေါ်တွင် ဖိထားလိုက်သည်။ ကျွန်တော်က စောက်ဖုတ်ကို လျက်ရင်းက ထွန်းထွန်း ဘာလုပ်မည်ကို ကြည့်နေသည်။ သူမ ညည်းသံများ ဆိုင်လင့်ဇာတပ်လိုက်သလို တိုးသွားသည်။ “ ညီလေး အတင်းမလုပ်နဲ့နော်… ငိုလိမ့်မယ်… ” ကျွန်တော် ခြေရင်းမှ ထပြီး သတိပေးလိုက်သည်။ ထွန်းထွန်းက အသာခေါင်းငြိမ့်ပြီး ပြုံးပြသည်။ သူ့အပြုံးက အဓိပ္ပာယ် တစ်ခုခုပါသည်။ ပိုင်နိုင်လွန်းသော အပြုံး။ သူမကို ကြည့်တော့ ပါးစပ်မှာ ထွန်းထွန်းလီးက တစ်ဝက်ဝင်နေသည်။ လက်နှစ်ဘက်က ကုတင်ပေါ်မှာ ဖိကပ်ခံနေရသော်လည်း တကယ်သာ သူမ ငြင်းချင်လျှင် ခေါင်းကို တစ်ဘက်စောင်းလိုက်ရုံသာ။ အခုတော့ သူမက အလိုက်သင့် ပါးစပ်ဟပေးထားသည်။
ထွန်းထွန်းက ဒိုက်ထိုးသလို သူမ လည်ပင်းပေါ်ခွပြီး လီးကို ပါးစပ်ထဲသို့ ခါးအားနှင့် တစ်ချက်ချင်း ဖိသွင်းနေသည်။ ထွန်းထွန်း၏လီးမှာ သူမပါးစပ်ထဲသို့ တစ်ဝက်ကျော်ကျော်အထိ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် ဖြစ်နေသည်။ သူမက နှုတ်ခမ်းလေး ဝိုင်းကာ ထွန်းထွန်းလီးကို သာသာလေး ငုံထားသည်။ တစ်ချက် တစ်ချက် အာခေါင်ထောက်မိသဖြင့် အင့်ကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားသည်။ အရှိန်ရလာတော့ ထွန်းထွန်းက ချုပ်ထားသော လက်ကို ဖြေပေးလိုက်ပြီး သူမ ခေါင်းကို ကိုင်လိုက်သည်။ သူမ၏ လက်က ထွန်းထွန်း ပေါင်ကို ခပ်ဖွဖွ ပြန်ကိုင်သည်။ ထွန်းထွန်းက သူမခေါင်းကို ထူကာ လီးကို သူမပါးစပ်ထဲသို့ တဆုံး ကော့သွင်းလိုက်တော့သည်။ “ အွတ်… အင့်… အင့်… အင်း… ” ကျွန်တော် တယုတယ အမြဲနမ်းသော နှုတ်ခမ်း။ ကျွန်တော့်ကို ကျေနပ်မှုရအောင် ပြုစုတတ်သော နှုတ်ခမ်း။ အခုတော့ ကျွန်တော် လီးမတောင်နိုင်တာကိုလည်း မသိ။ တစိမ်းယောက်ျား၏ လီးကို ပါးစပ်ဖြင့် စုပ်ကာ အသုံးတော်ခံနေသည်။ ကိုယ်ယောက်ျားကို ဘေးမှာထားပြီး တစိမ်းယောက်ျား၏ လီးကို စုပ်နေသည်မှာ တော်ရုံ လိင်စိတ်ကြွနေရုံနှင့် မဖြစ်။ ထွန်းထွန်းက သူမ ခေါင်းကို အသေအချာကိုင်ပြီး ပါးစပ်ကို စိတ်ကြိုက်လိုးနေသည်မှာ ကြေးစားမိန်းမတစ်ယောက်ကို တန်အောင် လိုးနေသည့်အတိုင်းပင်။ သူမပေါ်ခွထိုင်ထားသည့် ထွန်းထွန်း၏ပေါင်ကို သူမက မသိမသာ ဆုပ်ညှစ်ရင်း ပွတ်သပ်နေခြင်းက ဒီအခြေအနေမှာ လုံးဝပျော်ဝင်သွားပြီဆိုတာကို ပြနေသည်။
တစိမ်းတစ်ယောက်က ကိုယ့်မိန်းမကို ဖာသည်မလို သဘောထားပြီး ကျင့်နေတာကို မြင်တော့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲတွင် နာကျင်မှုနှင့်အတူ အမည်မသိ ခံစားချက်အသစ်က ဘွားကနဲ ပေါ်လာတော့သည်။ ထွန်းထွန်းက ‘အကို လိုးတော့လေ’ ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ မေးငေါ့ပြတော့ ကျွန်တော် ခေါင်းကို လေးပင်စွာ ခါသည်။ သူက ဘာကြောင့် ကျွန်တော် မလိုးတော့တာလဲ သိချင်မှ သိမည်။ ဂရုလည်း သိပ်စိုက်မှာမဟုတ်။ သူက ကျွန်တော့်မိန်းမကို လိုးဖို့သာ စိတ်အားထက်သန်နေသည်။ “ ဒါဆို ကျွန်တော် အမကို လိုးတော့မယ် ” ရင်ထဲ တဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်ရုံမှတပါး ကျွန်တော် မတတ်နိုင်။ ထွန်းထွန်းက လီးကို သူမပါးစပ်ထဲမှ ဆွဲထုတ်လိုက်ကာ သူမ နှုတ်ခမ်းကို လီးနှင့် နှစ်ချက် သုံးချက် တို့ပြီးမှ သူမ ပေါင်ကြားထဲ ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ သူမကို ကြည့်တော့ နှုတ်ခမ်းမှာ အရည်ကြည်များ စိုရွှဲနေသည်။ သူမကို လိုးမှာ တခြားလူမှန်း သိလျက်နဲ့ သူမ ခြေထောက်တို့က မလှုပ်မရှား ငြိမ်သက်နေသည်။ ပြတင်းပေါက်တံခါးနှစ်ချပ်ကို တွန်းဖွင့်လိုက်သလို ထွန်းထွန်းက သူမ ဒူးနှစ်ဘက်ကို ကိုင်ကာ ပေါင်ကို ဖြဲချလိုက်သည်။ သူမက အလိုက်သင့်ပင် ပေါင်ကို ဖြဲကားပေးနေသည်။ သစ္စာမရှိသော စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ မကြာခင်ဝင်လာမယ့် လီးအသစ်ကို ကြိုဆိုနေသလို။ ထွန်းထွန်းက ဒစ်ဖျားနဲ့ သူမစောက်ဖုတ်ကို မထိတထိ ကစားတော့ သူမ အသံထွက်လာသည်။
ကျွန်တော်လျက်တုန်းက ပေနေတဲ့ တံတွေးတွေကြောင့် ချောဆီမလိုအောင် ချောကျိနေမှာ သေချာသည်။ ထွန်းထွန်းက လီးမထည့်သေးဘဲ စိတ်ရှည်ရှည်နှင့် သူမကို လိင်စိတ်ပြန်ထအောင် ကလိနေသည်။ သူမ၏ အဓိကနေရာများကို သူလေ့လာသိရှိသလို ကောင်းကောင်းကြီး အသုံးချနေတော့သည်။ “ အင်း… အင်း အင့် အဟင့်… ” သူမမျက်နှာ မရိုးမရွ ဖြစ်လာသည်။ မဝင်လာသေးသည့် လီးအသစ်ကို စောင့်နေသလိုလို။ စောစောကပင် လီးမစုပ်ချင်လို့ အကြောက်အကန် မိန်းကလေးသည် အခုတော့ သိသိသာသာ အလိုးခံချင်နေပြန်သည်။ တစိမ်းယောက်ျားနှင့် အတူနေပေးရမှာကို ရှက်လို့ ငိုခဲ့သော မိန်းကလေးသည် အခုတော့ ပြုသမျှ ခံမည့် အသင့်အနေအထားမှာ ငြိမ်သက်လျက်။ ကျွန်တော် သူမကို ကြည့်ပြီး တစ်စုံတစ်ခုကို ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ထွန်းထွန်းနားကပ်ကာ တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်သည်။ သူမကတော့ စောက်ဖုတ်ဝမှာ ကလိနေတဲ့ လီးကို အာရုံရောက်နေသဖြင့် ကြားမည်မဟုတ်ပါ။
“ အကို မတားမချင်း ညီလေး အဆင်ပြေသလောက် ရှေ့ဆက်တိုးတော့… မင်းအမကို အရှက်ကုန်အောင် လုပ်လိုက်တော့… ” “ ကျွန်တော် ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပြောခိုင်းမယ် အမ မရှက်တော့အောင်… ရလား အကို… ” “ ရတယ်… သူဖီးကောင်းရင် ပြီးရော… ” “ အ…အား… အမေ့… ” ကျွန်တော့် စကားမဆုံးသေးခင်မှာပင် သူမ အော်ညည်းပြီး ကော့သွားသည်။ ကြည့်လိုက်တော့ ထွန်းထွန်းဒစ်ဖျား သွင်းထားသည်။ သူမ ညည်းနေတော့ ဒစ်ဖျားကို ဆက်မသွင်းဘဲ ပြန်ထုတ်လိုက်သည်။ အစိကို ဒစ်နဲ့ ထိုးဆွပြီး တစ်ချက် ပြန်သွင်းသည်။ “ ဟင့်… ဟင့်… အ… အ ” ဒီတစ်ခါ ပြန်မထုတ်။ လီးထိပ်ဝသွင်းထားပြီး သူမပေါ် ဖိလှဲချလိုက်သည်။ ထွန်းထွန်း၏ ကိုယ်လုံးကြီးအောက်တွင် သူမ ခန္ဓာကိုယ်လေးမှာ လုံးဝ ပျောက်ကွယ်နေသည်။ ထွန်းထွန်းက သူမ နို့များကို ကုန်းစို့ပြီး ညှစ်ကိုင်သည်။ ကုတင်ခြေရင်းကနေ ကျွန်တော် ကြည့်သည်။ ထွန်းထွန်းက လီးကို အဖျားလေးသာ ထုတ်ချည် သွင်းချည်လုပ်နေသည်။ ထွန်းထွန်း လီးက သူမ အရင် အလိုးခံလိုက်ရသော သီဟပစ္စည်းလို ပုံမှန်အရွယ်မဟုတ်။
ပြုပြင်ထားတာ မရှိပေမယ့် နဂိုအတိုင်းကို တုတ်ခဲ မည်းနေသည်။ “ ဟင့်အင်း တော်ပြီ… မပြောချင်ဘူး… ဟင့်… ဟင့်… အ… အ ” ထွန်းထွန်းအသံက တိုးနေသဖြင့် ကျွန်တော် မကြားရ။ သူမက ငြင်းနေသည်။ ဒီတစ်ခါလည်း သူမ ကြာကြာငြင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ကြောင်း စောစောက အတွေ့အကြုံအရ ကျွန်တော် သိနေသည်။ ထင်သည့်အတိုင်း မိနစ်ပိုင်းအတွင်း သူမ ပြောထွက်လာပြန်သည်။ သူမကို သူဘာတွေ ပြောခိုင်းနေသလဲ ကျွန်တော် သိလိုက်သည်။ “ အား… ဟင့် ဟင့်… အမကို လိုး…ပေးပါ… ” “……………. ” “ ဟင့်… အလိုး… ခံချင်… ပါတယ်… အား… အား… အား… ” ထွန်းထွန်းသည် လီးကို သူမစောက်ဖုတ်ထဲသို့ စေးစေးပိုင်ပိုင် ဖိသွင်းလိုက်သည်။ သူမ ရင်ကော့သွားသည်။ ရင်သားနှစ်မြွှာကတော့ ချက်ချင်း ပွင့်အာလာသည့် ကြာဖူးများလို မြင့်တက်လာသည်။ ထွန်းထွန်း၏ ရင်အုပ်က သူမ ကော့ပျံမတက်သွားအောင် သူ့ကိုယ်လုံးကြီးနဲ့ အုပ်မိုးကာ ဖိချလိုက်သည်။
ခါးအားဖြင့် ဖိကာ လီးကို သူမစောက်ဖုတ်ထဲ မှန်မှန်ကြီး သွင်းနေတော့သည်။ သူမ၏ လက်များ အိပ်ယာခင်းစကို ဆုပ်ကိုင်နေရာမှ ထွန်းထွန်း ပခုံးပေါ်ကို အလိုလို ဖက်လာသည်။ “ အား… အား… ဟင့်… အင့်… အား… နာတယ်… အား… ” အဆုံးစွန်သော ရင်ခုန်မှုမျိုးနှင့်အတူ ကျွန်တော် ခေါင်းတွေ ချာချာလည်လာသည်။ မြင်ကွင်းထဲမှာ ပီပီသသ တွေ့နေရသည်က ကျွန်တော့်မိန်းမနှင့် သူစိမ်းတစ်ယောက် ချစ်ရည်လူးကာ မြူးနေကြပုံ။ သူမ ထံမှ တစ်ခါမှ မကြားဖူးသော ညစ်ညမ်းစကားလုံးများလည်း ထွက်ပေါ်လာသည်။ ဒီလောက်ထိ သူမ လွယ်လွယ်နှင့် ပျော်ဝင်သွားမယ်လို့ မထင်ထားခဲ့။ ခံစားချက်မဲ့တဲ့ သစ်တုံးမဟုတ်ပေမယ့် ဒီအခြေအနေကို ဒီလောက်မြန်မြန် လက်ခံနိုင်မယ်လို့ မမျှော်လင့်ထားခဲ့။ အခုတော့ သူမသည် တစိမ်းတစ်ယောက်ကို နေ့စဉ် လိုးနေကျ လင်ယောက်ျားလို လက်ခံပြီး ဆက်ဆံနေသည်။
တစိမ်းတစ်ယောက်အတွက် ကျေကျေနပ်နပ် မယားအလုပ်ခံနေသည်။ ထွန်းထွန်းက အရှိန်အမျိုးမျိုး ပြောင်းကာ သူမကို လိုးသည်။ ပုံစံအမျိုးမျိုး ပြောင်းကာ ဆက်ဆံသည်။ သူမကို ဆွဲထူကာ သူပေါင်ပေါ်မှာ ထိုင်ဆောင့်ခိုင်းသည်။ ဘေးစောင်းခိုင်းပြီး နောက်မှ သွင်းသည်။ မတ်တပ်ရပ်ကာ သူမကို ခါးထစ်ခွင်ချီပြီး ဖက်လိုးသည်။ ကုတင်ဘေးက စားပွဲပေါ် ခြေတစ်ဘက်တင် ရပ်ခိုင်းပြီး နောက်မှ ခါးကို ကိုင်ဆောင့်သည်။ သုံးလေးမျိုးသာ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ လိုးတတ်သော ကျွန်တော့်မှာ အငေးသား။ ဒီကြားထဲ တစ်ချက်ချက် သူမ ပြောသော စကားများက ရင်တုန်ပန်းတုန် ဖြစ်စရာ။ မျက်နှာပူစရာ။ ရှက်စရာ။ ရမ္မက်မီးတို့ တရှိန်ရှိန် လောင်စရာ။ အဲကွန်းခန်းထဲမှာပင် ကျွန်တော့်နဖူးစပ်တွင် ချွေးများ တွဲခိုလျက်။ မိုးမမြင်လေမမြင် ကာမဂုဏ်တောမှာ ပျော်နေကြသူနှစ်ဦးမှာလည်း အရည်တို့ ချွဲပျစ်ကာ တစိုစို။ မနေ့ကအထိ အပြင်မှာ မမြင်ဖူးသော ယောက်ျားနှင့် မိန်းမသည် အရင်းနှီးဆုံး အခြေအနေမှာ ယှက်နွယ်ဆက်ဆံနေကြသည်။
“ ………………… ” “ အား… အား… ကောင်းတယ်… ဟင့်ဟင့်… ခံလို့ ကောင်းတယ်… အ…. ” “…………………. ” “ ဟင့်… ဘာလို့ အဲ့လိုပြောခိုင်းတာလဲ… အား… မပြောချင်ဘူး… ဟင့်အင်း… အား… မလုပ်ပါနဲ့… နာတယ်… အဟင့်… ” “ ………………… ” “ ဟာ… ရှက်တယ်… အား… အား… ဟင့်… မဟုတ်တာ… ဘာတွေ… ပြောခိုင်းနေတာလဲ… အား… သေပြီ… အမ အဲ့လို… မဟုတ်ဘူး… အ…. အား…. ” “ …………………… ” “ အား… အား… ဟုတ်တယ်… ဟင့်… ဟင့်… တူနေပြီ… ဟင့်… ” “ ……………………… ပြောလေ… ပြောပါ… တူနေတယ်မလား… ” “ ဟင့် ဟင့်… ဟုတ်ပါတယ်ဆိုကွာ… အ… အား… မမေးနဲ့တော့… ” ကျွန်တော် သတိထားမိတော့ လိင်တံက ပြန်မာနေလေပြီ။ သို့သော် အရှိန်ကောင်းနေသော စုံတွဲကို မနှောက်ယှက်ချင်တော့။ ထွန်းထွန်းက သူမကို လေးဘက်ကုန်းခိုင်းကာ ပုခုံးကို ကိုင်အားယူကာ သွင်းလိုက်သည်။ ထို့နောက် သူမ ခါးသေးသေးလေးကိုင်ကာ ဆီးစပ်နှင့် သူမတင်ပါး တစ်ဖတ်ဖတ်ရိုက်သည်အထိ ဆောင့်သွင်းနေသည်မှာ လီးတစ်ခုလုံး ဒုံးကျည်တစ်စင်းလို ကျွတ်ထွက်၍ သူမ ဗိုက်ထဲပြေးဝင်သွားမတတ် ပြင်းထန်လှသည်။
သူမမျက်နှာကတော့ နာကျင်မှု၊ သာယာမှု၊ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတို့ ရသစုံပန်းချီကားလို အရောင်ပြေးနေသည်။ “ ဖြန်း… ဖြန်း… ” “ အား… အ… နာတယ်… အား… ” သူမဖင်ကို ထွန်းထွန်းက အားမပါ့တပါ ခပ်စပ်စပ်လေး ရိုက်လိုက်သည်။ အရသာပျက်လောက်အောင် နာပုံမရတော့ ကျွန်တော် မတားမိ။ အတွင်းစိတ်သဘောမှာ မိန်းမတစ်ဦး၏ ယောက်ျားတစ်ဦးနှင့် ဆက်ဆံရသော အရသာကို သူမနေရာမှ ဝင်ခံစားကာ ရူးသွပ်မိခြင်းလား။ လိင်တူစိတ်ဝင်စားသော ဂေးတို့၏ စိတ်မျိုးနှင့်တော့ လားလားမှမတူတာ သေချာသည်။ “ ဖြန်း… … ” “ အား… သေပြီ… နာတယ်လို့… မရိုက်ပါနဲ့… အား… အား… ” “ မရိုက်စေချင်ရင် ကျယ်ကျယ်ပြောလိုက်လေ… မ… ကျွန်တော် စောစောက ပြောခိုင်းတာ… ” “ ဟင့်… ဟင့်အင်း… မဟုတ်ဘူး… အမ မဟုတ်ဘူး… ” “ ဖြန်း… ဖြန်း… ” ထွန်းထွန်း သူမ ဆံပင်ကို ဆောင့်ဆွဲပြီး နောက်မှ ဒူးနှင့်တိုက်သလို ဖင်ကို ဆောင့်လိုက်သည်။ သူမ မျက်လုံးပေါ်မှ မျက်လုံးအုတ် ကျွတ်လုမတတ် ဖြစ်သွားသည်။ သူမ ခါးကော့တက်လာတော့ ထွန်းထွန်းက နောက်မှ သိုင်းဖက်ကာ ပွေ့မလိုက်သည်။ လက်တစ်ဘက်က သူမ နို့ကို ညှစ်ရင်း တစ်ဘက်က စောက်ဖုတ်ကို သာသာ ကလိသည်။ သူမ ဂုတ်ပိုးနှင့် နားရွက်ကို ရှိုက်နမ်းရင်း ချော့မြှူသည်။ လီးကိုတော့ ဖြည်းဖြည်းသာ သွင်းရုံလေး သွင်းနေသည်။
“ ပြောလိုက်ပါ… နော်… မကလဲ… ” “ ဟင့်… ဟင့်… အ… အ… မပြောရဲဘူးလို့… ဟင့်… ” “ ပြောလိုက်ပါ… တကယ်မဟုတ်ဘူးလေ… ပြောလိုက်ရုံပဲ… မရှက်နဲ့နော်… မ… ” “ အ… အဟင့်… အား… အား… ” ” ပြောလေ… မ… နော်… ” “ ဟင့်ဟင့်… ဖာသည်မလို… လိုးပေးပါ… … … … … ” သူမ နှုတ်ခမ်း လှုပ်ရုံကလေး လှုပ်သည်။ အသံက မထွက်ပေမယ့် သူမပြောလိုက်တဲ့ စကားကို လူတိုင်း သိနိုင်လောက်သည်။ ကျွန်တော် ကြက်သေသေသွားသည်။ ရင်ထဲတွင် အမျိုးအမည်မသိသော ခံစားချက်များ ရောယှက်နေသည်။ သူမကို ဒီကိစ္စမှာ အရှက်ကုန်တဲ့အထိ လုပ်ဖို့ ကိုယ်တိုင် တောင်းဆိုတာမှန်သည်။ ဒါပေမယ့် သူမက ကျွန်တော် ပန်းတိုင် သတ်မှတ်မျှော်လင့်ထားတာထက် အဝေးကြီး ခရီးလွန်သွားပြီ ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် မထုရဘဲ အလိုလို သုက်ထပ်ထွက်ပြန်သည်။ ထွန်းထွန်းက ကုတင်အောက်ဆင်းပြီး သူမကိုပါ ဆွဲချလိုက်သည်။ ကုတင်ပေါ် လက်ထောက် ကုန်းခိုင်းပြီး စောစောကလို မြန်မြန်ဆောင့်လိုးပြန်သည်။ ဒီတစ်ခါ စောစောကထက် ပိုမြန်သည်။ သူပြီးတော့မည်။ သူမ အသံပျောက်မတတ် ပါးစပ်ကို အစွမ်းကုန်ဟကာ အသက်ရှူနေသည်။
“ အား… အား… အား… သေပါပြီ… အား… ” အားအပြင်းဆုံး တစ်ချက် ဆောင့်အသွင်း၊ သူမ ကုတင်ပေါ် မှောက်ရက်လဲကျသွားသည်။ ထွန်းထွန်းက ချက်ချင်းပင် ဆွဲထူကာ ကုတင်အောက်ကို ဆွဲချသည်။ သူမ မတ်တပ်မရပ်နိုင်။ ထွန်းထွန်းခြေရင်းမှာ ဒူးခွေထိုင်ကျသွားသည်။ ထွန်းထွန်းက လီးကို သူမ ပါးစပ်ထဲ စွပ်ကနဲ ထည့်လိုက်သည်။ သူမ စုပ်လည်း မစုပ်နိုင်၊ ထွေးလည်း မထွေးနိုင်အောင် မောနေတော့ လီးကို ပြန်ထုတ်ပြီး ဂွင်းထုသည်။ အဖြစ်အပျက်တွေက မြန်ဆန်လွန်းသည်။ ထွန်းထွန်းက သူမမျက်လုံးပေါ်မှမျက်လုံးအုတ် ကို ဆတ်ကနဲ ဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ သူမ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့ ထွန်းထွန်းလီးကြီးက အရည်ချွဲများ ကပ်ငြိလျက် ဒစ်နီကြီးမှာ အရေပြားထဲ ဝင်ချည် ခေါင်းပြူချည် ဖြစ်နေတာကို မြင်သည်။ ကြာကြာကြောက်ချိန်မရလိုက်။ ထွန်းထွန်းက သူမခေါင်းကို ဆံပင်မှ ဆွဲယူကာ ပါးစပ်ထဲသို့ လီးကို သွင်းပေးလိုက်သည်။ “ အားပါးပါး… အား… အင်း… ” ဆီးစပ်နှင့် သူမ မျက်နှာကပ်နေသည်။ လည်ချောင်းအထိ နင်နေသဖြင့် ထွန်းထွန်းပေါင်ကို လက်ဖြင့် တွန်းလွှတ်သော်လည်း ကျားရဲစိတ်ဝင်နေသော ထွန်းထွန်းက သူမ ခေါင်းကို မလွှတ်ဘဲ သူ့ဆီးစပ်မှာ ဖိကပ်ထားသည်။ သူမ မလူးမလွန့်သာ ရုန်းရင်း တစ်ချက် နှစ်ချက်ခန့် ကော့တက်သွားသည်။ မျက်နှာလေးမှာ သနားစဖွယ် ရှုံ့မဲ့နေသည်။ ထွန်းထွန်းက မြင်ပုံမရ။
ခေါင်းကို မော့ကာ အောင်နိုင်သူ စစ်သူကြီးတစ်ယောက်လို အကောင်းဆုံးသော ပြီးမြောက်ခြင်း အရသာထူးကို ခံစားနေသည်။ “ မျိုချလိုက် အမ… မထွေးနဲ့နော်… မျိုချလိုက်… ” ထွန်းထွန်းလက်ကို ဖြေလျော့လိုက်သည်နှင့် သူမ ခေါင်းကို ဘေးစောင်းကာ သုက်ရည်များကို ထွေးချလိုက်သည်။ သုက်ရည်များက တံတွေးနှင့်ရောကာ သူမ ပါးစပ်တွေ ပေရေ စီးကျနေသည်။ ထွန်းထွန်းသုက်ရည်များ သူမ မျိုချမိလား မမျိုချဘူးလား သူမသာ အသိဆုံး ဖြစ်မည်။ ကျွန်တော်သိသည်က ဒါ သူမဘဝတွင် ပထမဦးဆုံး သုက်ရည်ကို ပါးစပ်ထဲ အပန်းခံရခြင်း ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်ထဲတွင် မြင်နေကျ မြင်ကွင်းပေမယ့် အခု မင်းသမီးက ကိုယ့်မိန်းမ ဖြစ်နေသည့်အတွက် ရင်ထဲတွင် တဆစ်ဆစ် နာကျင်မိသည်။ ထွန်းထွန်းက သူပြောခိုင်းသည့်အတိုင်း သူမကို ကြေးစားပြည့်တန်ဆာမတစ်ယောက်လို လိုးသွားသည်။ လိုးရုံမက သူမကိုယ်တိုင် လိုလိုလားလား ဝန်ခံ ပြောထွက်လာအောင် မြှူဆွယ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ လက်ဝှေ့ပွဲတစ်ခုဆိုလျှင် ထွန်းထွန်း၏ လိင်ကိစ္စကျွမ်းကျင်မှုက နိုင်၍ သူမ၏ အရှက်သိက္ခာက ရှုံးသည်။ လွန်ဆွဲပွဲ တစ်ခုဆိုလျှင် သူမ၏ ရမ္မက်အင်အားက ဆွဲရာသို့ သူမ၏ အသိတရားနှင့် ခန္ဓာတို့ အလျှော့ပေးလိုက်ပါသွားရသည်။
ထွန်းထွန်းက သင်တန်းဆရာဆိုလျှင် သူမသည် တစ်ကြိမ်တည်းနှင့် သင်လွယ်တတ်လွယ်သော သင်တန်းသူ ဖြစ်ပေမည်။ ပျော့စပြုနေပြီဖြစ်သော ထွန်းထွန်း၏ လီးကို ကိုင်ပြီး သူမ စုပ်ပေးနေသည်။ သုက်အချွဲများ ကုန်အောင် မိနစ်အနည်းငယ် ကြာတဲ့အထိ လီးအစုပ်ခံပြီးနောက် ထွန်းထွန်းက သူ့လီးကို သူမ ပါးစပ်ထဲမှ ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ သူမကို ဖြည်းဖြည်း မထူကာ ကုတင်ပေါ် တင်ပေးပြီး သူက ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်သွားသည်။ ‘ အကိုကော အဆင်ပြေရဲ့လား’လို့ ဝတ္တရားကျေ မေးသွားသည်။ သူမ ဘေးကို ကျွန်တော် ဝင်လှဲလိုက်တော့ သူမ ကျွန်တော့်ဘက် လှည့်လာသည်။ ကျွန်တော့်မျက်နှာကို အကဲခတ်ကာ စူးစမ်းကြည့်သည်။ ကျွန်တော့်မျက်နှာပေါ်မှာ အဖြေတစ်ခုခု ရှာဖို့ သူမ ကြိုးစားသည်။ သူမ စိတ်လွတ်လက်လွတ် ပြောမိတာတွေကို နောင်တရနေတာ သေချာသည်။ မျက်ရည်စများ စီးကျလာပြန်သည်။ “ ကိုကို ညီမကို ရွံသွားပြီမလား… ” သူမက စမဖက်ရဲတော့ ကျွန်တော်ကပဲ စဖက်ထားလိုက်သည်။
သူမ နဖူးကို နမ်းရင်း ရှုပ်ပွနေသော ဆံပင်တွေကို သပ်တင်ပေးလိုက်သည်။ “ ညီမရယ်… ကိုကိုက ညီမကို ဒီလို ခံစားစေချင်လို့ ကိုကို ကိုယ်တိုင် စီစဉ်ခဲ့တာလေ… ဘာကို ကိုကိုက ရွံရမှာလဲ… ညီမက အကို့ဆန္ဒကို လိုက်လျောပြီး အဆင်ပြေအောင် အတူတူနေပေးတော့ ပိုပြီးတောင် ချစ်သေးတယ်… တကယ်ပြောတာပါ… ” “ ဒါဆို သူလုပ်နေတော့ ကိုကို ဘာလို့ ဝင်မလာတာလဲ… ” “ ကိုကို စိတ်လှုပ်ရှားပြီး ဘယ်လိုမှ ထောင်မရလို့ပါ… ကလေးကို ရွံလို့ မဟုတ်ဘူး… နော်… ” “ သူလုပ်နေတုန်း ညီမပြောတဲ့ စကားတွေကို အတည်မယူနဲ့နော်… ကိုကိုတို့ စိတ်ကျေနပ်အောင် ပြောပေးတာ… ” ကျွန်တော် ပြုံးကာ ခေါင်းငြိမ့်လိုက်သည်။ သူမ၏ အရှက်သိက္ခာအတွက် သူမ၏ ကာကွယ်ဖြေရှင်းချက် မှန်သမျှတို့ကို ကျွန်တော် မတားဆီး။ အကျိုးမရှိသော အမှန်စကားထက် သူမ၏ လိပ်ပြာလုံမှုက ပိုအရေးကြီးသည် မဟုတ်ပါလား။
“ စောစောက ကောင်းလား… ” “ သည်နေ့ တစ်ရက်က တစ်သကလုံးအတွက် နောက်ဆုံးပဲနော် ကိုကို… ကျေနပ်တော့နော်… ” ကျွန်တော် ဘာမှမပြောဘဲ အသာပြုံးနေသည်။ ထွန်းထွန်း ပြန်ဝင်လာပြီး သူမ ဘေးတွင် ဝင်လှဲသည်။ ကျွန်တော်တို့ ခြုံထားသော စောင်ကိုပါ ဆွဲယူခြုံလိုက်သည်။ သူမက ထွန်းထွန်းဘက်ကို လှည့်ကြည့်တော့ ထွန်းထွန်းက သူမပါးကို ရွှတ်ကနဲ နမ်းလိုက်သည်။ သူမကို အလယ်မှာထား ဖက်ထားကြသည်။ သူမ၏ နို့နှင့် အဖုတ်ကို အာသာပြေ ပွတ်သပ်ကြရင်း ကျွန်တော်တို့ သုံးဦး တစ်ရေးအိပ်ကြသည်။ အားလုံး ပင်ပန်းနေတော့ ခဏလေးနှင့် အိပ်ပျော်သွားကြသည်။ အိပ်မက်ထဲတွင် မှောင်မည်းနေသော လှိုဏ်ခေါင်းတစ်ခုထဲသို့ ကျွန်တော်တို့ စီးသော ရထားက မဆုံးနိုင်အောင် ခုတ်မောင်းနေသည်။ အပြင်လောကတွင်ကော အလင်းမဲ့သည့် ခရီးစဉ်တစ်ခုက ဘယ်အချိန်မှာ လမ်းဆုံးပါမည်နည်း။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အငှားလငျ လုပျပရစေ